အရည်အသွေးနဲ့ အရေအတွက်များ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ပေါ်စေရေး အသင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး စားအုန်းဆီတင်သွင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ယခင်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကသာ တင်သွင်းစေခဲ့ရာမှ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ ပို့ကုန် ဝင်ငွေရှိတဲ့ မည်သည့်ကုမ္ပဏီမဆို တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ရာဆီတင်သွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု၊ တင်သွင်းမှုနဲ့ သိုလှောင်မှု ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ပိုမိုသိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် မှားယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ပေါ်စေဖို့နဲ့ တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးရာမှာ ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ အရည်အသွေး၊ အရေအတွက် မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လယ်ယာ ထွက်ကုန် ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးက ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ စာချုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ FDA မှ တာဝန်ရှိသူ၊ ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးတဲ့ MITS မှ တာဝန်ရှိသူတို့မှ ဆွေးနွေးဟောပြောမှုနဲ့ တင်သွင်းသူ ကုမ္ပဏီများရဲ့ ပြန်လည်ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်မှာ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးရုံးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ အဓိကထားဆွေးနွေးမှုတွေကို ကောမတ်စ်က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဦးကျော်ထူး (ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး မြန်မာ့ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး) စားအုန်းဆီတင်သွင်းဖို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိတဲ့အတွက် ပမာဏလျော့နည်းကာ အရည်အသွေးမမှန်တာတွေ ရှိပြီးတင်သွင်းလာသူ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါ ရောင်းချသူနဲ့ ဝယ်သူအကြား သမမျှတတဲ့ စာချုပ် ဖြစ်ပြီး အဓိကစားသုံးသူများလည်း နစ်နာမှုမရှိအောင် စာချုပ် ချုပ်ဆိုသွားဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ လက်ရှိ အနေအထားမှာWeight လျော့ကျမှု ဖြစ်ရပြီး ကြန့်ကြာကြေး (Demarrage) တွေ မလိုအပ်ဘဲ ပေးဆောင်နေရတဲ့အတွက် စရိတ် စက ပိုမိုကြီးမြင့်မှု ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း နိုဝင်ဘာလ ထဲမှာဝင်ဖို့ ပင်လယ်ဝမှာ သင်္ဘော ၈ စီးလောက်ရှိနေပြီး ဒီဇင်ဘာလ မှာလည်း ၁၂ စီးဝင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဆီကန်တွေမှာ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ထုတ်ယူခြင်းမရှိတဲ့ အတွက် ပင်လယ်ဝမှာ သင်္ဘောတွေထပ်နေပြီး ဝင်မရချမရ ဖြစ်ရတာပါ။ ဆီကန်ထဲကနေ ဆီထုတ်ယူဖို့ နေပြည်တော်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့လက စားအုန်းဆီကိစ္စဆွေးနွေးစဉ်က တင်သွင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံဆီလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ ဆီကုန်သည်များအသင်းတို့ အချင်းချင်း ကိုယ်တိုင်ညှိနှိုင်းသဘောတူထားခဲ့တဲ့ ဆီထုတ်ယူမှု သတ်မှတ်ရက် တွေကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်တဲ့တိုင် ထုတ်ယူခြင်းမရှိတာကြောင့် သင်္ဘောတွေ delay ဖြစ်ရတာပါ။ ဒါတွေက တင်သွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းမှုမရှိတာ ကြောင့်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဆီလုပ်ငန်းကို ရေရှည်လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ Inland Tank တွေလို ဆီသိုလှောင်ကန်တွေ တည်ဆောက်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဝင်လာတဲ့ ဆီတွေကို ဈေးကွက်ထဲဖြန့်ဝေတာကို ဆီကန်ကပဲ တိုက်ရိုက် လုပ်နေတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းဆီကုန်သည် ဆီဖြန့်ဝေသူတွေအနေနဲ့ ဈေး ကွက်မှာ ဈေးကောင်းလို့ အရောင်းအဝယ်သွက်ရင် မြန်မြန်ထုတ်ပေမဲ့ ဈေးကွက်မှာ အရောင်းထိုင်းရင် ဆီကန်မှာပဲ လှောင်ထားတဲ့သဘော ရှိနေလို့ ဆီသင်္ဘောတွေ ဆိုက်မရဘဲ ဖြစ်နေရတာပါ။ အဲဒီတော့ ပင်လယ်ဝမှာ ဆီမသမာမှုတွေဖြစ်ပြီး ပမာဏလျော့ကျမှုတွေဖြစ်ရသလို သင်္ဘောကြန့်ကြာကြေးကလည်း တစ်ရက်ကို ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ပေးဆောင်နေရတာတွေရှိတဲ့အတွက် ကြာရင်ကြာသလို ကုန်ကျစရိတ်တက်ပြီး ဈေးကွက်မှာ ဖြန့်ဖြုူးနိုင်မယ့် ဈေးထက် ပိုရောင်းချတဲ့ သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ သင်္ဘောဝင်ရောက်မှုမထပ် ရအောင် လိုင်စင်နဲ့ ထိန်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော်အစိုးရက လုပ်ငန်းရှင်တွေ အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ ဖြေလျှော့မှုတွေ လုပ်ပေး နေတဲ့အချိန်၊ စီးပွား/ကူးသန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကလည်း လုပ်ငန်း ရှင်တွေအတွက် အစစကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ လိုင်စင်နဲ့ သင်္ဘောအဝင်ကို ထိန်းခြင်းဖြင့် ကုန်သည်တွေအပေါ်မှာ ဝန်ထုပ်ဝန် ပိုးမဖြစ်စေဖို့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အသင်းတို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီး ပြည် ထောင်စု ကုန်ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီက ထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီတင်သွင်းရာမှာလည်း လစဉ် သင်္ဘော ၁၂ စီးနဲ့ ၁၃ စီးကြား ရှိပြီး တန်ချိန် ၂၅၀၀၀-၃၀၀၀၀ ကြားရှိတဲ့အတွက် ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ မတ်လအတွက် ယခုလို အခက်အခဲတွေ မဖြစ်ရ အောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလမှာ သွင်းမယ့်ကုမ္ပဏီတွေ စုပြီး ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကို စဉ်းစားတွက်ချက်ကာ ဥပမာအနေနဲ့ တန်ချိန် ၃၀၀၀၀ သွင်းမယ် ဆိုရင် ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခု စုစည်းပြီး အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှားတို့မှာ တင်ဒါခေါ်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်၊ ဆိပ်ကမ်းဆိုက်ရောက် မယ့် ကာလကို ဆီထုတ်ယူမှုနဲ့ ချိန်ပြီး တင်သွင်းမယ်ဆိုရင် စောစော က တင်ပြခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေ လျော့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်ပဈေး နှုန်း၊ ငွေလဲနှုန်းနဲ့ ပြည်တွင်းဈေးနှုန်း စတဲ့အချက်တွေကိုတော့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက နည်းလမ်းတစ်ခုပါ ဒီထက် ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိရင်လည်း တင်သွင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ အသင်းတို့ ဆွေးနွေးပြီး တင်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ စားအုန်းဆီမှာ ရောနှောပြီး ပဲဆီအဖြစ် ရောင်းချမှုတွေရှိတဲ့အပေါ် စားသုံးသူတွေ နစ်နာမှုမရှိရအောင် ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေသူတွေကို အသိပညာပေးဖို့လည်း လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ အဓိကပြောချင်တာကတော့ ရောင်းသူရော ဝယ်သူပါ အကျိုး အမြတ်မျှတပြီး စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ယုံကြည် စိတ်ချရပြီး ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ စားသုံးနိုင်ဖို့ အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်စာချုပ် ချုပ်ဆိုမှု အပိုင်း၊ အရေအတွက်ပိုင်းနဲ့ အရည် အသွေးပိုင်းမှာ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့ တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒေါက်တာ ကျော်လင်း (ညွှန်ကြားရေးမှုး FDA ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန) ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်အောက် မှာရှိတဲ့ FDA ဌာနအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှု ရှိ၊ မရှိ Quality ကို စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စားအုန်းဆီအနေနဲ့ Physical ပိုင်းက အရောင်၊ အနံ့ပြောင်းလဲမှုရှိရင် စားသုံးဖို့ သင့်/ မသင့် စစ်ဆေးပေးသလို chemical ပါဝင်မှု၊ ပိုးမွှားပါဝင်မှုတွေအရ စားသုံးဖို့ သင့်/မသင့် စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။FDA အနေနဲ့ စားအုန်းဆီကို သင်္ဘောပေါ်မှာရော Show Tank မှာရောအပြင် Distribution မှာ ရောင်းချတဲ့အထိ စားသုံးသူလက်ထဲမရောက်မီ မစားခင်အထိ စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ စားအုန်းဆီမခဲအောင် ရောနှော ပြီး ပဲဆီအဖြစ်ရောင်းတဲ့ကိစ္စစတဲ့ ပြည်သူလူထုကို လိမ်ညာမှု မရှိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဦးတင်မောင်ဝင်း ( အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် )စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စားအုန်းဆီစာချုပ်ကို လေ့လာတဲ့အခါ မလေးရှား ပိုရမ် (PORAM ) Spec နဲ့ လန်ဒန် အခြေစိုက် Federation of Edible Oil & Fats Association ရဲ့ International Contract အရ ချုပ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီစာချုပ်တွေက International Terms တွေဖြစ်လို့ တချို့အချက်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး၊ ဒါ့အပြင် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းဟာ River Port သာဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင် တိုက်ရိုက်ကုန်ချ နိုင်ပေမဲ့ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှာတော့ သင်္ဘောဟာ ပင်လယ်ဝကနေ ကုန်ချဖို့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ကို အကြောင်းကြားရပြီး ရေကြောင်းပြ အရာရှိကို စေလွှတ်မှသာ ဝင်ရောက်ကုန်ချရပါတယ်။ လက်ရှိစာချုပ်အရ ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတဲ့အခါ Demarrage/ Despatch (D/D rate) ဖြစ်တဲ့ ကြန့်ကြာကြေး/ အမြန်ကြေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ Charter party စာချုပ်အရ အမြန်ကြေး Despatch money ကို ကုန်ရောင်းသူက ပေးအပ်မည်မဟုတ်လို့ ဖော်ပြထားပြီး ရန်ကုန်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းမှာ ကြန့်ကြာကြေးDemarrage charges များ သင်္ဘောကို ပေးဆောင်ရဖို့ရှိရင် ကုန်ဝယ်သူက ပေးဆောင်ဖို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခုဆိုရင် သင်္ဘောကြန့်ကြာမှုအတွက် ကုန်ဝယ်သူကပေးနေရတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ အမြန် ကြေးမပေးခြင်း No Despatch ဖြစ်တာမို့ Demarrage ကြန့်ကြာကြေးကိုလည်း No Despatch အဖြစ် တောင်းဆိုကြည့်ရင် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ဆွေးနွေးကြစေလိုပါတယ်။ နောက် စားအုန်းဆီ RBD Palm Olein ရဲ့ စံချိန်စံညွန်းမှာ ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်း မျဉ်းနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၂၀၀၈ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ယခု စာချုပ်မှာ ပြည့်စုံမှုမရှိဘဲ ယင်းစာချုပ်ရဲ့ စံချိန်စံညွန်းမှာ FFA , Moisture & Impurities , Iodine Value , Colour နဲ့ Melting Point သာ ပါဝင်တဲ့အတွက် မိမိတို့ နိုင်ငံက အလေးထားနေတဲ့Cloud Point ကို10 degree centigrade Max အစား 8 degree centigrade Max အဖြစ်လည်းကောင်း၊ Iodine value ကို ၅၆ အစား ၅၈ ြထေ အဖြစ်လည်း ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် ပြင်ဆင် ပေးသွင်းစေဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ Weight / Quality ပိုင်းမှာလည်း ကုန်တင်ဆိပ်ကမ်းမှာ တင်ပို့ တဲ့ အလေးချိန်၊ အရည်အသွေးအတွက် သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးသူက စစ်ဆေးပြီး အဲဒီစစ်ဆေးချက်ဟာ နောက်ဆုံး အဆင့်ဖြစ်ပြီး ကုန်ရောင်းသူရော ကုန်ဝယ်သူကပါ ဒီစစ်ဆေးချက် ကို လက်ခံဖို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်မှ အလေးချိန် လျော့ရင် Seller နဲ့ မဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုတဲ့ စင်ကာပူကုမ္ပဏီလို ကုန်စည်စစ်ဆေး တဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သင်္ဘောမတင်မီ အလေးချိန်နဲ့ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုကို တောင်းဆိုဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ အဓိကတော့ ကုန်ဝယ် သူက CIF စနစ်နဲ့ ဝယ်ယူတာဖြစ်လို့ ကုန်ရောင်းသူအနေနဲ့ ကုန်တင် ဆိပ်ကမ်းမှာ ကုန်ပစ္စည်း သင်္ဘောပေါ်ကို တင်ပို့ပြီးရင် Transfer Ownership မှာ ကုန်ဝယ်သူကို ပိုင်ဆိုင်မှု လွှဲပြောင်းပြီဆိုပြီး Incoterm 2010 မှာဖော်ပြပါရှိထားပြီးဖြစ်လို့ ကုန်တင်ဆိပ်ကမ်း မှာသာWeight / Qualityဟာfinal ဖြစ်လို့ကုန်မတင်မီအလေးချိန်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုကိုပိုင်နိုင်စွာလုပ်ဆောင်ဖို့သာရှိပါတော့တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အာမခံကြေးပေးလျော်ဖို့ ကိစ္စဖြစ်ပေါ် လာရင်လည်း စင်ကာပူနိုင်ငံမှာသာ ပေးလျော်ထုတ်ပေးပါမည်ဆိုပြီး စာချုပ်ပါဝင်တဲ့အချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာ ပေးလျော်ဖို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေမယ်လို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဦးဝင်းဆွေ (အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာ MITS) မြန်မာကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးရေးနှင့် စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းလီမိတက် (Myanmar Inspection & Testing Services Ltd ) အနေနဲ့ မြန်မာ့ပို့ကုန်စစ်ဆေးတဲ့အခါ ဝယ်သူနှစ်ခြိုက်မှုရရှိစေဖို့နဲ့ ဈေးကွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရရှိစေဖို့ ဖြစ်ပြီး သွင်းကုန်စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ စာချုပ်ပါအတိုင်း ပြည့်ပြည့်၀၀မှန်မှန်ကန်ကန် ရရှိစေဖို့အပြင် ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးလျော့နည်းခြင်းများအတွက် မိမိဘက်က အားနည်းမှု မရှိရအောင် စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ရောင်းသူနဲ့ ဝယ်သူများ သတ်မှတ်ထားတဲ့ သတ် မှတ်ချက်တွေအရဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ စားအုန်းဆီကို စာချုပ် ပါအတိုင်း အရည်အသွေးနဲ့ ပမာဏကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ MITS အနေနဲ့ဆီရောက်လာရင် သင်္ဘောမှာပါလာတဲ့ အထောက်အထားများလက်ခံပြီး FDA ကိုပို့တဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်း နဲ့တကွ ကြိုတင်သန့်ရှင်းထားတဲ့ ဘူးများနဲ့ နမူနာထည့်ပြီး အရည် အသွေးပိုင်းစစ်ဆေးဖို့ပို့ရပါတယ်။ နောက် ဆီကန်မှာလည်း သန့်ရှင်း ရေးလုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီး Dry Certificate ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ်က ဆီပမာဏကို စစ်ဆေးတဲ့ အခါ Ship ပေါ်မှာပါတဲ့ Tank တွေရဲ့ ချိတ်ပိတ်အနေအထား ပျက်စီးခြင်းရှိ/မရှိ၊ အပူချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးပြီး သင်္ဘောဆီကန် တစ်ကန်ချင်းရဲ့ အပေါ်လွှာ၊ အလယ်လွှာနဲ့ အောက်လွှာစတဲ့ အလွှာ စုံယူပြီး တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပါတယ်။ ဦးလှထွန်း(ဗဟိုသမဝါယမအသင်း) Contract ရဲ့ သဘောက တရားမျှတမှု ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ စားအုန်းဆီ စာချုပ်အရ ရောင်းသူဘက်က သာသာ ထိုးထိုး လုပ်ထားတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ စာချုပ်ကိစ္စ ပြန်လည်ပြုပြင်သင့်ပါတယ်။ ဦးသိန်းဟန် (ဥက္ကဌ မြန်မာနိုင်ငံဆီလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဆီကုန်သည်များအသင်း) စာချုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်လိုပါသလဲ ကုမ္ပဏီများ အနေနဲ့ဆွေးနွေး ပေးကြပါ။နောက်တစ်ချက်ကဆရာဦးတင်မောင်ဝင်း ဆွေးနွေးသလို စားအုန်းဆီရဲ့Spec ကိစ္စကိုလည်းထည့်သွင်းပြင်ဆင် ရပါမယ်။ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းအခြေအနေအရ မြစ်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်လို့ turnover နဲ့ ပတ်သက်လို့ Supplier တွေနဲ့ ဆွေးနွေးသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ သင်္ဘောတွေ နှောင့်နှေးခြင်းဟာ Storage facilities အားနည်းလို့ ပင်လယ်ဝမှာ သင်္ဘောစောင့်တဲ့အရေ အတွက်က မလျော့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါနဲပတ်သက်လို့ တင်သွင်းသူ တွေအနေနဲ့ Inland Tank တွေ တည်ဆောက်ကြပြီး ဆီကန်မှာ ၁၄ ရက်အတွင်း ထုတ်ယူလို့မကုန်ရင် မိမိတို့ သိုလှောင်ကန်မှာ ထားရှိဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ စာချုပ်ပြင်ဆင်ဖို့ ကိစ္စနဲ့ ဇန်နဝါရီမတ်လ အထိ ဆီတင်သွင်းရေးအတွက် လာမယ့်အင်္ဂါနေ့(နိုဝင်ဘာလ ၂၉ )မှာ ကုမ္ပဏီများနဲ့ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီး ပြည်ထောင်စုကုန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်ရေး ကော်မတီကို အမြန်ဆုံး တင်ပြသွားဖို့ ဆောင်ရွက် သွားပါမယ်။ ဦးမျိုးအောင် (ဒါရိုက်တာ Diamond Dragon Co.,Ltd.) ကျွန်တော်တို့ ဆီကန်အနေနဲ့ ISO စည်းကမ်းအတိုင်း ဆီထုတ်ယူပြီးတိုင်း ဆီကန်ကို အမြဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်သလို ဆီထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း Dry Certificate ရယူထားပါတယ်။ ဆီတင်သွင်း သူတွေအနေနဲ့လည်း အရည်အသွေး၊ အနံ့နဲ့ ပမာဏအတွက် ယုံမှားသံသယမဖြစ်ရအောင် ဆီသင်္ဘော ရောက်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ ဆီကန်အတွင်း သန့်ရှင်းကြောင်း၊ ဘာပစ္စည်း လက်ကျန်မှ မရှိကြောင်း ပူးပေါင်း ကြည့်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆီသင်္ဘောပေါ်က စတင် ထုတ်ယူချပြီး ဆီဖြန့်ဝေသူများကို ပြန်လည်ထုတ်ယူပေးတဲ့အထိ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပါဝင် ဆောင်ရွက် မယ်ဆိုရင် ပြဿနာတစ်စုံ တစ်ရာ ဖြစ်ပါကလည်း သံသယရှင်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးထွန်းအေး (ဒါရိုက်တာ United Group) နိုင်ငံအနေနဲ့ ၁ လကို တန်ချိန် ၃၀၀၀၀ တင်သွင်းတာ မများ ပါဘူး။ စုပေါင်းတင်သွင်းဖို့ ကိစ္စ၊ သင်္ဘောများ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြေရှင်းဖို့ ဆီအသင်း၊ တင်သွင်းသူ၊ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးသူ၊ သင်္ဘောလိုင်းနဲ့ ဆီထုတ်လုပ်သူ စတဲ့ ကဏ္ဍစုံမှပါဝင်ပြီး ကော်မတီဖွဲ့ စည်းကာ အဖြေရှာပါမယ်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ တင်သွင်းသူများ က သင်္ဘောရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ လေရောင်းလေဝယ်လုပ်နေကြတာ ကြာရင် ရှုပ်ထွေးမှာစိုးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကော်မတီဖွဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဦးမျိုးသက်ပိုင် (အောင်တမံ ကုမ္ပဏီ) လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက ဆီတင်သွင်းရာမှာ အားလုံးညီညွတ်မှု မရှိလို့ ရောင်းသူ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား တို့ဆီမှာ အောက်ကျို့ပြီးဝယ်ယူနေရပါတယ်။ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အကြံပြုသလို ကုမ္ပဏီများအားလုံး ရှယ်ယာလုပ်ပြီး သွင်းမယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပြည်ပက တင်သွင်းတာကိုပဲ အားမကိုးဘဲ အာရုံပြောင်းပြီး တင်သွင်း ကုမ္ပဏီတွေ စုစည်းကာ ပြည်တွင်းမှာ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့လည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြံပြု တင်ပြလိုပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲမှ အဓိကညှိနှိုင်းရရှိချက်များ- မြန်မာနိုင်ငံဆီလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဆီကုန်သည်များ အသင်းနဲ့ တင်သွင်းကုမ္ပဏီတို့မှ အချင်းချင်း စာချုပ်ကိစ္စကို ညှိနှိုင်းပြီး ရရှိလာတဲ့ သဘောတူညီချက် အားလုံးမျှတတယ်လို့ ယူဆရင် Seller ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့ - ဆီသိုလှောင်ကန်မှာ ဆီထုတ်ယူမှု ကြန့်ကြာတဲ့အတွက် ပင်လယ်ဝမှာ သင်္ဘောများ အလှည်စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ ပြဿနာ ပြေလည်နိုင်စေဖို့ အသင်းနဲ့ Importer ကုမ္ပဏီများ မှ တစ်လ တင်သွင်းမယ့် တန်ချိန်ပမာဏနဲ့ တင်သွင်း မယ့် ကုမ္ပဏီများညှိနှိုင်းပြီး သင်္ဘောကြန့်ကြာမှုမရှိစေရေး၊ ဆီလှောင်ကန်များမှ ဆီကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ထုတ်ယူရေးနဲ့ သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပါက ရက်လွန်ကြေးပေး ဆောင် ရှင်းလင်းခြင်းများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ် ဆွေးနွေးသွားရေး၊ ညှိနှိုင်းရရှိချက်များအရ အသင်းမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုကုန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်ရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြပြီး ကော်မတီမှ ထိန်းကျောင်း ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျုံမှုန့်တင်သွင်းရေး ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးသီတင်းပတ်အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ညီလာခံမှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တချို့က လောလောဆယ်မှာ ဂျုံစေ့ကို တင်သွင်းခွင့်ပြုထားလျက်ရှိပြီး ဂျုံမှုန့် တင်သွင်းခွင့်မပြုထားခြင်းအပေါ် ဆွေးနွေးကြပြီး ဂျုံမှုန်တင်သွင်း ခွင့်ပြုရေး တင်ပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျုံဟာ ရေမြေအနေ အထား အကန့်အသတ်နဲ့ စိုက်ပျိုးရတဲ့ သီးနှံဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေ နဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း အချို့ဒေသများမှာသာ အများဆုံးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး ဂျုံစိုက်ပျိုးမှုဟာ ဧက၂၃၀၀၀၀-၂၄၀၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပြီး တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းတန်ချိန် ၁၂၀၀၀၀ ကျော်- ၁၃၀၀၀၀ ဝန်း ကျင် ထွက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးက စိုက်ဧက တစ်သိန်းခွဲ၊ နှစ်သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး စိုက်ပျိုးမှုရဲ့ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကတော့ စိုက်ဧက ၂၃၀၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါတယ်။ နောက် ကချင်၊ မကွေးဘက်မှာလည်း အနည်းအကျဉ်း စိုက်ပျိုးတယ် လို့ သိရပါတယ်။ စားသုံးမှု တိုးလာလို့ ဂျုံစေ့တင်သွင်းမှု ပိုမို တစ်နေ့တခြားတိုးပွားလာတဲ့ လူဦးရေ၊ စားသုံးမှုပုံစံပြောင်းလဲလာမှု တို့နဲ့အတူ ဂျုံစားသုံးမှုလည်း တိုးတက်လျက်ရှိနေရာမှာ နှစ်စဉ် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့ မလုံလောက်တဲ့ပမာဏကို ပြည်ပနိုင်ငံတွေက တင်သွင်းနေရ ပါတယ်။ ဒီလိုတင်သွင်းရာမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများစွာနဲ့ ဂျုံစေ့ကိုသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျုံစေ့တင်သွင်းမှုကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ၂၀၀၉- ၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ သြစတြေးလျ၊ တရုတ်၊ ဂျာမဏီ၊ ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊ယူအေအီး၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတို့က တန် ချိန် ၁ ဒသမ ၆၄၅ သိန်း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ တန်ချိန် ၂ ဒသမ ၁၂၃ သိန်း တင်သွင်းခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ရေမြေအနေ အထားအရ ဂျုံစိုက်ပျိုးမှုသိသိသာသာ တိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု မရှိ ပေမဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ စားသုံးမှု ပြည့်မီအောင်တော့ တင်သွင်းမှု တွေ ပိုမိုလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုကုန်ကြမ်းအတိုင်းတင်သွင်းရာမှာ ရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်၊ တွေ့ကြုံ ရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ အကယ်လို့များ ဂျုံမှုန့်တင်သွင်းမယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးနဲ့ အပြစ်ကို လေ့လာနိုင်ဖို့ ဂျုံလုပ်ငန်းမှာ အဓိကပါဝင်နေတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ရန်ကုန်ဂျုံလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မန္တလေး ဂျုံမှုန့် လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ မုံရွာဂျုံစက်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအမြင်များကို ကောမတ်စ်က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဂျုံစေ့ အလုံအလောက်ဝယ်ယူမရလို့ စက်ရုံတချို့ ရပ်နားရတယ် လို့ဆို ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြည်တွင်းထွက် ဂျုံစေ့များကို အရောင်း အဝယ်ပြုလုပ်တဲ့ မန္တလေးဈေးကွက်ကို အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်မယ် ဆိုရင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဂျုံစိုက်ဧက ၂၈၁၄၄ ကနေ အထွက် ၂၃၁၁၉ တန်ခန့်ရှိပြီး စားသုံးမှု ၃၈၀၅၅ တန်ရှိတဲ့အတွက် တိုင်းတွင်း ဂျုံလိုအပ်ချက် ၁၁၉၃၅ တန်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဂျုံစက်ရုံကြီး ၂၂ စက်၊ အလတ် ၄၃ စက်နဲ့ ဂျုံစက်ငယ် ၃၉ စက်၊ စုစုပေါင်း ဂျုံစက် ၁၀၄ စက်လည်ပတ်ထုတ် လုပ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဂျုံထုတ်လုပ် တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်အရ ဂျုံမှုန့် ထုတ်လုပ်ဖို့ ဂျုံစေ့ကို ပြည်တွင်းမှာ ဝယ်ယူရတာ အခက်အခဲရှိလို့ စက်များအနေနဲ့ ကိုယ်ထုတ်နိုင်သလောက် ဂျုံမှုန့်မထုတ်လုပ် နိုင်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဂျုံစက်ငယ်ပိုင် လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း ပြည်ပက တင်သွင်းတဲ့ ဂျုံစေ့ကို ဂျုံစက်ရုံကြီးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဝယ်ယူနိုင်မှုမရှိလို့ အခက်အခဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ " ဂျုံစေ့ကို ပြည်ပကနေ တင်သွင်းခွင့်ပြုရင် ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းငယ်သမားတွေ စုပေါင်းပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ တစ်ဆင့်ခံတွေများလို့ ဂျုံစက်ငယ်တော်တော်များများ ရပ်နားထားရတယ်" လို့ ဂျုံစက်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ကြိတ်ခွဲနိုင်သလောက် ဂျုံစေ့ကို ရောင်းချမပေးနိုင်ဘဲ ဈေးကွက် ထိန်းချုပ်တဲ့သဘော၊ ခွဲတမ်းနဲ့ ရောင်းချပေးတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ မုန့်လုပ်ငန်းရှင်များက ဂျုံကိုယ်တိုင်တင်သွင်းလို မန္တလေးမြို့အခြေစိုက်ဘီစကစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ကလည်း "ကျွန်တော်တို့က ဂျုံစက်ကြီးနဲ့ ဂျုံစက်ငယ်တွေဆီက ဂျုံမှုန့် ဝယ်ရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ချင်တဲ့ မုန့်Quality မျိုး ဂျုံမှုန့် ဝယ်မရတာလည်း ကြုံတွေ့ရတယ်။ ဂျုံစေ့ကို ကိုယ်တိုင်Import လုပ်ခွင့်ရရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Quality မျိုးရပြီး ဈေးလည်းသက် သာမယ်။ ဂျုံစက်လေးတွေလည်း ပိုအလုပ်ဖြစ်မယ်" လို့ပြောပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ စားသောက်ကုန်ထုတ် လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း အနေနဲ့လည်း ဂျုံမှုန့်တင်သွင်းရေး ကိစ္စကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကလည်း တင်ပြဆောင်ရွက်ဖူး ကြောင်း သိရပြီး တကယ်လို့ Import လုပ်ခွင့်ရရင် အသင်းအနေနဲ့လည်း စုပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ် လို့အသင်းအလုပ် အမှုဆောင်က ပြောပါတယ်။ ဥပဒေမဲ့ဲ့ တင်သွင်းလာတဲ့ ဂျုံမှုန့်များကြောင့် ပြည်တွင်းစက်သမားများ ထိခိုက် ဂျုံအများဆုံးစိုက်ပျိုးထွက်ရှိရာ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာနယ်မှာရှိတဲ့ ဂျုံစက်သမားများရဲ့ရင်းတွင်း စကားအနေ နဲ့တရုတ်ဒေသကြီးဖက်က အကောက်ခွန်မဲ့ ဝင်လာတဲ့ ဂျုံမှုန့်ဈေးက ၁၅ ပိဿာဝင်တစ်အိတ် ၁၄၀၀၀ကျပ် ခန့်၊ တစ်ပိဿာ ၉၀၀ ကျပ်ခန့်သာရှိပြီး ဒေသဂျုံမှုန့်က တစ်ပိဿာ ၁၁၀၀ ကျပ်ခန့်ရှိတဲ့အတွက် ယှဉ်ရောင်းဖို့ အခက် အခဲရှိ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တရားဝင်နိုင်ငံတော်က တင်သွင်းခွင့်ပြုရင် ဂျုံမှုန့်အရည်အသွေးမီပြီး မိမိဒေသဈေးနဲ့ သိပ်မကွာလို့ ဖောက်သည် မလျော့ဘဲ ဈေးကွက်ယှဉ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း ဝင်ငွေရရှိစေမှာ ဖြစ်ပြီး စက်သမားတွေ လက်ခံနိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပဒေမဲ့ အခွန်လွတ်တင်သွင်းလာတဲ့ ဂျုံမှုန့်တွေမှာ ဒိတ်အောက်တွေ ဖြစ်ပြီး ဈေးလျော့ရောင်းနိုင်တဲ့အတွက် ပြည်တွင်း စက်သမားတွေကို ထိခိုက် နစ်နာစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျုံမှုန့်အစား ဂျုံစေ့ တင်သွင်းပြီးမျှတတဲ့ဈေးနဲ့ဖြန့်ဝေစေလို မုံရွာဂျုံစက်သမားတွေ ဆန္ဒကတော့ မျှတတဲ့ ဂျုံမှုန့်ဈေးနဲ့သာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ ဖြန့်နိုင်ရင်ဂျုံစိုက် တောင်သူတွေအတွက်လည်း ထိုက်သင့်တဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ရစေပြီး စားသုံးသူအတွက်လည်း ပစ္စည်းမှန် ဈေးမှန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်လို့ ပြည်ပက ဂျုံမှုန့်အစား ဂျုံစေ့ ကိုသာ တင်သွင်းရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တယ်လို့ သုံးသပ်သံကို ကြား သိရပါ တယ်။ ဂျုံစက်ရုံများ တိုးပွားလာခြင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဂျုံလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လာတဲ့ Diamond Star ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးပြောကြားတာ ကတော့ " မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်အထိ ပြည်တွင်းဂျုံမှုန့် လို အပ်ချက်ရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို တင်သွင်းခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် က စပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့လို ပြည် တွင်း လုပ်ငန်းရှင်များမှ ဂျုံစက်ရုံတွေ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းများ မှန်ကန်မှု ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ဂျုံမှုန့်တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပြည်တွင်းစက်ရုံများထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိပြည်တွင်း စက်ရုံ တွေက ဂျုံမှုန့် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ ပုဂ္ဂလိကစက်ရုံ ၄ ခုမှ တစ်ရက် တန်ချိန် ၁၆၆၀၊ မုံရွာ၊ မန္တလေးနဲ့ အခြားမြို့များမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်စက်ရုံ ၅၀ ခန့်မှ တန်ချိန် ၅၀၀ ခန့်၊ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ပိုင်စက်ရုံမှ ၁၃၀ တန်ခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် စုစုပေါင်းစက်စွမ်းအားဟာ နေ့စဉ်တန် ၂၃၀၀ခန့် ထုတ် လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိပြီး တစ်နှစ်လုံးအနေနဲ့ တန်ချိန် ၈ သိန်းကျော်လောက် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုထက် စက်စွမ်းအားကပိုနေလို့ ဂျုံမှုန့်တင် သွင်းဖို့မလို ဆက်လက်ပြီး " လက်ရှိ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုမှာ ဂျုံစေ့အနေနဲ့ တန်ချိန် ၃ သိန်းခန့်သာ ရှိလို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ စက်စွမ်းအားရဲ့ ၃ ပုံ၁ ပုံခန့်သာ စားသုံးလျက်ရှိတဲ့အတွက် ပြည်ပက ဂျုံမှုန့် တင်သွင်းဖို့ မလိုသေးဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတော်က ဂျုံမှုန့်တင်သွင်းဖို့ ပိတ်ပြီး ဂျုံစေ့တင်သွင်းခွင့်ပြုထားခြင်းဟာ အားသာ ချက်တွေရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ရှိနေပြီးသားဖြစ်လို့ ပြည်တွင်းတောင်သူ များ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သလောက် အချိန်မရွေး ဝယ်ယူအသုံးပြုပေးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် တောင်သူတွေ ဂျုံစေ့ စိုက်ပျိုးလို့ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်လာရင် ပိုမိုစိုက်ပျိုးလာ နိုင်မှာဖြစ်လို့ တောင်သူတွေရဲ့ စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် ဂျုံစေ့မှ အမှုန့်ကြိတ်ရာမှာ ပြည်တွင်းလုပ်သားများ ကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး ပိုမိုရရှိလာနိုင်ပြီး စက်စွမ်းအားပြည့် ထုတ်လုပ်နိုင်ရင် တိုက်ရိုက်လုပ်သားဦးရေ ၁၅၀၀၀ ခန့်နဲ့ သွယ်ဝိုက် လုပ်သားဦးရေ ၆၅၀၀၀ ခန့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိပါတယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းမှုက ကုန်ချောထက် အကျိုးများတယ်လို့ဆို " ဒါ့အပြင် ဂျုံစေ့ကြိတ်ခွဲရာမှ ထွက်ရှိတဲ့ ဖွဲနု၊ ဖွဲကြမ်းများ ဟာလည်း တိရစ္ဆာန်အစာအတွက် အရေးပါတဲ့ ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ပြည်တွင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုနေပါ တယ်။ ဒီလို အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ကုန်ကြမ်းများကို ဦးစားပေးတင်သွင်းစေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကုန်ချော တင်သွင်းခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံများမှာလည်း တင်သွင်းပမာဏ ကန့်သတ်ထားခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ကုန်ကြမ်းထက် ကုန်ချောကို တင်သွင်း ခွန် တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်းတွေ ပြုလုပ်တာတွေရှိပါတယ်"လို့ အကြံပြု ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဂျုံမှုန့်တင်သွင်းရင် ဈေးသက်သာနိုင်ပေမဲ့ အရည်အသွေးတော့ ကွာမယ်လို့ဆို OK ဂျုံမှုန့်လုပ်ငန်းမှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးတင်ဦးနဲ့ ဆွေးနွေးရာမှာလည်း "လက်ရှိမှာ ဂျုံစေ့ပဲ တင်သွင်းနေရာက ဂျုံမှုန့်ပါတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးကွက်မှာ ဂျုံမှုန့်ပေါပြီး ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျုံမှုန့်ဆိုရာမှာ မုန့်လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးအစားအရ အသုံးပြုတဲ့ ဂျုံမှုန့်အရည်အသွေး အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက် ပြည်ပက တင်သွင်းတဲ့ ဂျုံမှုန့်ဟာ Customer အကြိုက်ဖြစ်ဖို့လည်း ခက်ခဲပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ တင်သွင်းသူ များအနေနဲ့ သာမန်အဆင့် ဂျုံမှုန့်ကို ဈေးလျှော့ရောင်းနိုင်ပေမဲ့ Special quality ဂျုံမှုန့်အမျိုးအစားဟာ ပြည်ပကဂျုံစေ့တင်သွင်းပြီး ကြိတ်တဲ့ ပြည်တွင်းဂျုံမှုန့်ကို ယှဉ်ပြီးရောင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး" လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျုံမှုန့်များလျော့ချနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ အခက်အခဲများ ဆက်လက်ပြီး " လက်ရှိကျွန်တော်တို့ ဂျုံစေ့တင်သွင်းရာမှာ ဆိပ်ကမ်း facilities မပြည့်စုံတဲ့အတွက် ကွန်တိန်နာနဲ့သာ တင်သွင်း နေရတာကလည်း ဂျုံမှုန့်ဈေးလျှော့ပြီး မရောင်းနိုင်တဲ့ အချက်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံ တွေမှာ ဂျုံစေ့တင်သွင်းတဲ့အခါ ဆိပ်ကမ်းမှာ လေစုပ်တင်နိုင်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အဦပြည့်စုံတဲ့အတွက် သင်္ဘောအစီးလိုက်တင်သွင်းနိုင်လို့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ဂျုံမှုန့်ကို ဈေးချရောင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် ကတော့ ဂျုံက ထွက်တဲ့ By-products ဖြစ်တဲ့ ဂျုံဖွဲနုက ပြည်တွင်းမှာ ဈေးကောင်း မရတာပါဘဲ။ ပြည်တွင်းမှာ ဂျုံဖွဲနုကို တိရစ္ဆာန်အစာအတွက် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုမှုနည်းတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေ ထွန်းကားတော့ တိရစ္ဆာန်အစာဖြစ်တဲ့ ဂျုံဖွဲနုဈေးကောင်းရရှိပြီး ဂျုံမှုန့်ဈေးကို ချရောင်း နိုင်ပါတယ်။ နောက်စက်ရုံလည်ပတ်ရာမှာ မီးအားအပြည့်မရရှိတဲ့ အခါ မီးစက်အသုံးပြုရတော့ တစ်ယူနစ် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမားပါ တယ်။ ဒါတွေကဂျုံမှုန့်ဈေးလျှော့ချမရောင်းနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေပါ" လို့ပြောပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ကျိတ်ခွဲတဲ့ ဂျုံမှုန့်များ ဘေးကင်းစိတ်ချရကြောင်း အာမခံချက်ပေးနိုင် " ကျွန်တော်တို့ ဂျုံစေ့တင်သွင်းပြီး ပြည်တွင်းမှာ ကြိတ်ခွဲခြင်း အားဖြင့် ရရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ဂျုံမှုန့် Customer တွေ လိုအပ်တဲ့ Quality ကို Customer များအကြိုက် ထုတ်လုပ် ရောင်းချပေးနိုင်တယ်။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိမယ်၊ ပြီးတော့ ဂျုံမှုန့်အနေနဲ့လည်း စားသုံးသူတွေ food safety အဖြစ် စိတ်ချလက်ချဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့ အာမခံချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂျုံမှုန့် တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်းဟာ ဈေးကွက်တစ်ခုပဲကြည့်ရင် မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးပေါတဲ့ ဂျုံမှုန့်တွေ တင်သွင်းခြင်း အားဖြင့် ပြည်တွင်းဂျုံစေ့ စိုက်ပျိုးသူတွေ ထိခိုက်နိုင်သလို ဂျုံမှုန့်စက်ရုံတွေကရရှိတဲ့ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းလည်း နည်းပါးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ ဂျုံလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ Contract farming ပုံစံနဲ့ တောင်သူ တွေကို မျိုးစေ့နဲ့ သွင်းအားစုအတွက် ငွေချေးပေးပြီး ဂျုံကို ပြန်လည် ဝယ်ယူ ပေးတဲ့အတွက် တောင်သူတွေအတွက် ပုံမှန်ဈေးကွက် ရရှိနိုင်လို့ အထွက်နှုန်းပိုပြီး အကျိုးအမြတ်ပိုမိုရရှိပါတယ် " လို့ ဆွေးနွေးပါတယ်။ တင်သွင်းစရိတ်လျော့ချရေး အခြေခံအဆောက်အဦးများ တိုးမြှင့်သင့်၊ တင်သွင်းသူများမှလည်း မျှတတဲ့ အကျိုးအမြတ်နဲ့ ဆောင်ရွက်သင့် တကယ်တော့ ပြည်တွင်းစားသုံးမှု လုံလောက်ဖို့အတွက် ပြည်တွင်းမှာ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတော် အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ရေမြေအကန့်အသတ်အရ စိုက်ပျိုးရတဲ့ ဂျုံစေ့အနေနဲ့ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက် ပြည့်ဝအောင် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိရင်လည်း လိုအပ်ချက်ကို ဝယ်ယူတင်သွင်းရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဝယ်ယူတင်သွင်းတဲ့အခါ ပြည်တွင်းလုပ် ငန်းရှင်များ အကျိုးအမြတ်ရှိပြီး ဈေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ တင်သွင်းစရိတ်လျှော့ချရေး လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တိုးမြှင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိတင်သွင်းနေတဲ့ ဂျုံလုပ်ငန်း ရှင် များအနေနဲ့လည်း ပြည်တွင်းစက်ရုံငယ်များ လုပ်သာကိုင်သာရှိစေဖို့ မျှတတဲ့ဈေးနှုန်း၊ သင့်တင့်တဲ့ အကျိုးအမြတ်နဲ့ ဆောင်ရွက်ကြ မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ရေရှည်လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ AFTA , AEC တို့မှာ လုပ်ငန်းရှင်များ ရှင်သန်နိုင်ရေး ပြည်ပက တရားမဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့ ဂျုံမှုန်များကြောင့် လက်ရှိအချိန်မှာတောင် ပြည်တွင်းဂျုံမှုန့်စက်ရုံတချို့ ယှဉ်ပြိုင် ရောင်းချနိုင်မှုမရှိရင် နောင်မကြာမီ ရောက်ရှိတော့မယ့် ၂၀၁၅ မှာ တွေ့ကြုံရမယ့် Asean Free Ttrade Area , Asean Economi Community တို့မှာလုပ်ငန်းရှင်များ မကျရှုံးရေးကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ပြည်ပက အရည်အသွေးမမီတဲ့ ဂျုံမှုန့်အမျိုးအစားများ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုမရှိတဲ့ ဂျုံမှုန့်များ ဝင်ရောက်မလာရေးကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းများနဲ့ ကန့်သတ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရာမှာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်မျိုးထဲ ဆောင်ရွက်လို့မရသလို အစိုးရတစ်ခုထဲကလည်း ဆောင်ရွက်လို့မရတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းရှင်ကြီး၊ လတ်၊ သေး အားလုံးစုပေါင်းတဲ့ အသင်းအဖွဲ့များမှ တက်ကြွစွာဦးဆောင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များ အဆင်ပြေချော့မွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အဘက်ဘက်က ဖြေလျှော့ပေးနေတဲ့ ယခုလိုကာလမှာ လုပ်ငန်းရှင်များကတော့ မိမိလုပ်ငန်းသဘာဝ၊ ရယူလိုတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို တင်ပြနေပါပြီ။ ဂျုံစေ့သွင်းသည် ဖြစ်စေ၊ ဂျုံမှုန့်သွင်းသည်ဖြစ်စေ အဓိကတော့ ပြည်တွင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေကို မထိခိုက်ဘဲ၊ ပြည်သူများရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုမိုရရှိဖို့။ လုပ်ငန်းရှင် အကြီး၊ အလတ်၊ အသေးအားလုံး ဆက်လက်ရှင်သန်ရေးနဲ့ စားသုံးသူများ ဘေးကင်း စိတ်ချရတဲ့ စားသောက်ကုန်များဖြစ်ဖို့ကိုတော့ အဓိကထား စဉ်းစားဖို့တော့လိုကြောင်းပါ။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် ငါးဖမ်းဆီးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းခွင်ကို လေ့လာကြည့်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိကအပိုင်းမှ ပြင်ပတွင်အခေါ်အသုံးများသော (၁)ပဲ့နင်းကြီး၊ (၂)စက်ဆရာ၊ (၃)ငါးဆရာတို့သည် ကဏ္ဍအလိုက် အရေးပါသော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေကြကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပဲ့နင်းကြီးကျွမ်းကျင်မှုမရှိလျှင် ကျယ်ပြောလှသော မြန်မာ့ ပင်လယ်ပြင်တွင် ငါးဖမ်းစက်လှေသည် လိုရာခရီး မပေါက်မြောက် သကဲ့သို့ စက်ဆရာသည် အင်ဂျင်ပိုင်းနှင့် အင်ဂျင်ခန်း နိုင်နင်းစွာ မကိုင်တွယ်နိုင်က ခရီးဖင့်နှေးကြန့်ကြာ၍ ချာချာလည်နေမည်သာ ဖြစ်သည်။ လိုရာခရီးသို့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချောမွေ့စွာရောက်ရှိသော် လည်း ဖမ်းဆီးရယူလိုသည့် ငါးအုပ်ရှိရာသို့ ငါးဆရာက လမ်းညွှန်မပြ နိုင်လျှင်လည်း ရေသာများ၍ ငါးလည်းမတွေ့ပြီဆိုသကဲ့သို့ အချိန် အချည်းနှီး၊ ငွေကြေးအလဟဿ၊ ဆီကုန်၊ လူပန်းနှင့် နွမ်းလျအိမ် ပြန်သာ ဖြစ်ပေတော့မည်။ ဤသည်မှာ ၂၀၁၁ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ လုပ်ငန်းရှင်များ တက် ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ဘုံကျောင်းငါးဖမ်းလှေများတွင် တရုတ်နိုင်ငံ သားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ လိုက်ပါခွင့်ပြုသင့်/မသင့် ဆွေးနွေးပွဲမှ ပင်လယ်ပြင်နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်နှင့်ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ခဲ့သော ဌာနဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၊ ပင်လယ်ပြင်တွင် လက်ရှိလုပ်ကိုင်ဆဲဖြစ်သော ငါးဖမ်းလှေများမှ ပဲ့နင်းကြီးများ၊ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် သက်စွန့်ဆံဖျား လိုက်ပါလုပ်ကိုင်ရင်း အမျိုးသားများနှင့် ရင်ဘောင် တန်း လက်တွေ့ကျကျ ငါးဖမ်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးပညာရှင်၊ တရုတ်နိုင်ငံ သားကျွမ်းကျင်သူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်အချို့ကို ခြုံငုံတွေးဆ မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဘုံကျောင်းငါးဖမ်းစက်လှေ (သံခွံ)များကို မြန်မာနိုင်ငံသို့တင်သွင်း၍ ငါးဖမ်းစက်လှေတစ်စီးလျှင် တရုတ်ကျွမ်းကျင်သူ သုံးဦးအထိလိုက်ပါငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပြုခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီ လည်း အကျိုးရှိ၊ ငါးအထိအမိလည်း ပိုမိုခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့ကာလတွင် နိုင်ငံခြားသား ကျွမ်းကျင်သူများ လိုက်ပါခွင့်မရတော့သည့်အတွက် ဘုံကျောင်းငါးဖမ်းလှေများ အခက်အခဲနှင့် တွေ့ကြုံနေရပါကြောင်း၊ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွင် ပဲ့နင်းနှင့် ငါးဆရာ နေရာတွင် မြန်မာ ကျွမ်းကျင်ရေလုပ်သားများသို့ နည်းပညာလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းဖြင့် အစားထိုးတာဝန် ပေးအပ်နိုင် ပါသော် လည်း တရုတ်သံခွံသင်္ဘော၏ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာ ရှုပ်ထွေးသဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ယခင်ကပင် လူအများစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသည့် အင်ဂျင် ပိုင်းကို မြန်မာလူမျိုးများသို့ လက်ဆင့်ကမ်းပညာပေး ဝေခဲ့ခြင်း မရှိ သဖြင့် ဘုံကျောင်းငါးဖမ်းစက်လှေ တရုတ်သံခွံသင်္ဘောများတွင် တရုတ်ကျွမ်းကျင ်(အင်ဂျင်စက်ပိုင်း ပညာရှင်)တစ်ဦး (သို့) နှစ်ဦးလိုက် ပါရန် တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့မှသာ မြန်မာရေလုပ်သားများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပြန်လည်ရရှိ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်ကို သိရှိခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာတို့သည် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်ခန့်မှ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပေ။ စီးပွား ဖြစ် ငါးဖမ်းဆီးခြင်းကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် DSI ဗိုလ်လက်ျာ လက်ထက်ကတည်းက ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်း၍ တရွတ်ဆွဲ ငါးဖမ်းစက်လှေများဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ စီးပွားဖြစ် မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးဖမ်းဆီးခြင်းလုပ်ငန်းကို (၁၉၇၂) ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ် လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်၊ ပြည်သူ့ပုလဲနှင့် ငါးလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း မှ ပြည်သူပိုင်အခန်းကဏ္ဍမှ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ ပုလဲနှင့်ငါးဟု အမည်ကျော်ကြားလှသည့် မြန်မာ့ပုလဲနှင့် ငါး ကော်ပိုရေးရှင်းလက်ထက်တွင် Mothership အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းသော ဘေးချတရွတ်ဆွဲ (Side trawl) လင်ဇင်း (Lin Zin) သင်္ဘောဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဟော်လန်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူတင်သွင်းသော ပုစွန်ဖမ်းတရွတ်ဆွဲ (Double rig shrimp trawller) ၊ ရေဝတီသင်္ဘော(Sterm Trawl)များဖြစ်ကြသည့် ဘရဏီ၊ ရောဟဏီ၊ မိဂဿီစသည့် သံခွံသင်္ဘောများသည် ပုလဲနှင့် ငါးဖမ်းသင်္ဘောများအဖြစ် ထိုခေတ်က လူသိများ ကျော်ကြားလှသည်။ ထိုခေတ်ကာလက မြန်မာလူမျိုးများသည် ရေချိုမြစ်ချောင်း အင်းအိုင်ငါးများကိုသာ စားသုံးမှုများပြားပြီး ပင်လယ်ငါးစားသုံးသူ မရှိသလောက်ရှားပါးလှသဖြင့် စကော့ဈေး(ယခုဗိုလ်ချုပ်ဈေး) အတွင်းတွင် ယမုံနာငါးဆိုင် ဖွင့်လှစ်၍ " ပင်လယ်ငါးစားမှ အားရှိ သည်" ''ခေတ်မီသူတိုင်း ပင်လယ်ငါးစားကြသည်"ဟု ကြော်ငြာ၍ ငါးမုတ်၊ ကကတစ်စသည့်ငါးများကို စားချင့်စဖွယ်ကြော်၊ ချက်ရောင်းချသည်မှာ ယနေ့တိုင်စွဲမက်ဖွယ်ကြော်ငြာအဖြစ် ထင်ကျန် ရစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက် ငါးခိုး ဖမ်းသည့် ထိုင်ဝမ်ငါးဖမ်းစက်လှေ (သံခွံ ကိုယ်ထည်)များကို ပုလဲနှင့် ငါးသို့ လွှဲပြောင်းလက်ခံပြီးနောက် ငါးရာအုပ်စုရေယာဉ် (501, 503, 507, 509, 511, 515,517) အဖြစ်သတ်မှတ်၍ ပင်လယ်ငါးဖမ်း လုပ်ငန်းတိုးမြှင့်ခဲ့သည့်နည်းတူ တစ်ဖက်မှလည်း ODA (Oversea Development Agency) နှင့် ADB( Asia Development Bank) တို့မှ ချေးငွေဖြင့် စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ၊ ဇီးဖြူသောင်၊ မြိတ်၊ ထားဝယ်၊ ဝါးကျွန်းအစရှိသည့် မြန်မာ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက် အအေးခန်းစက်ရုံများတည်ဆောက်၍ ငါး၊ ပုစွန်ပြုပြင် မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ကိုရီယားနိုင်ငံမှ မှာယူတင်သွင်း သော ရေယာဉ်၏အရွယ်အစားအလိုက် သတ်မှတ်သည့် တစ်ရာ အုပ်စုဝင် ရေယာဉ် ၁၀ စီးနှင့် ငါးရာအုပ်စုဝင် သုံးစီး၊ သြစတြေးလျ နိုင်ငံမှ လေးရာအုပ်စုဝင် ပုစွန်ဖမ်းရေယာဉ် ၁၀ စီး၊ နော်ဝေးနိုင်ငံမှ မှာယူတင်သွင်းသော လေးရာအုပ်စုဝင် ပုစွန်ဖမ်းရေယာဉ် ၁၀ စီး၊ ငါးဖမ်းရေယာဉ်နှစ်စီး၊ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ လေးရာအုပ်စုဝင် ပုစွန်ဖမ်းရေ ယာဉ်လေးစီး၊ UK နိုင်ငံမှ မှာယူတင်သွင်းသော လေးရာအုပ်စုဝင် ပုစွန်ဖမ်းဖိုက်ဘာရေယာဉ် ၁၀ စီး၊ သုညသုည(၀၀)အုပ်စုဝင် ကမ်းနီး ရေယာဉ်အသေး ၁၀ စီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ငါးရာအုပ်စု ဝင် နှစ်စီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်သို့ ဝင်ရောက်ငါးခိုးဖမ်း သဖြင့် လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသည့်တန်ကေး (သစ်သားလှေခွံ) နှစ်ရာ အုပ်စုဝင်များဖြင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ သားမြန်မာသင်္ဘော(ကပ္ပတိန်)များဖြင့်သာ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ငါးဖမ်း ဆီးခြင်းလုပ်ငန်းကို အဆင့်ဆင့်တိုးတက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထက်တွင် ပုလဲနှင့် ငါးရေယာဉ် (ငါးဖမ်းသင်္ဘော)များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြရခြင်းမှာ ဂျပန်၊ နော်ဝေး၊ ဒိန်းမတ်၊ UK ၊ သြစတြေးလျ၊ တရုတ်(တိုင်ပေ)စသည့် မည်သည့်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့် မတူညီသော တည်ဆောက်ပုံပါ၊ အင်ဂျင်စက်ခန်း၊ သင်္ဘောကိုယ် ထည်(သံခွံ/သစ်သား) ပင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောအင်ဂျင်နီယာများ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် လာရောက်မောင်းနှင်ပေးခြင်း၊ စက်ပြင်ဆင် ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ မြန်မာသင်္ဘောကပ္ပတိန်နှင့် မြန်မာစက်ဆရာ များသာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင် စက်ပြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့သည် အတတ်ပညာတစ်ခုကို သင်ယူတတ် မြောက်လွယ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဤသည်မှာလည်း အခြားမှလာ သည်မဟုတ် အတွင်းပင်ကိုယ်အခံဗီဇစိတ်တွင် ရယူလိုခြင်း၊ သင်ယူ လိုခြင်း၊ တတ်မြောက်လိုခြင်းတည်းဟူသော စေ့ဆော်စိတ်ကြောင့် ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်ကားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလုံးအရင်းဖြင့် နယ်အနှံ့နေရာယူထားသော်လည်း ဂျပန်ဒရိုင်ဘာနှင့် ဂျပန်စက်ပြင်တစ် ယောက်မျှပါမလာခဲ့ပါ။ ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာလူမျိုးများ ကိုင်တွယ် အသုံးချ ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ် သော ဒေါက်တာနေဇင်လတ်ရေးသားသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်တွင် လောကတွင် ပညာမတတ်သောပညာရှိနှင့် ပညာမရှိသောပညာ တတ်ဟူ၍ ရှိကြောင်း၊ အချို့မှာ တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်မှ ဘွဲ့ဒီဂရီ တစ်ခုမျှပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာဆိုသကဲ့သို့ ၎င်း၏လုပ်ငန်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာကို တစ်ဖက် ကမ်းခပ် အသုံးချတတ်မြောက်သဖြင့် ပညာမတတ်သော ပညာရှိများ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အချို့မှာ တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်မှ ဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ခုကို ရယူ ပိုင်ဆိုင်ထားသော်လည်း ပညာရပ်ကို မကျွမ်းကျင်အသုံးမချ တတ်သဖြင့် ပညာမရှိသောပညာတတ်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြထား သည်မှာ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ သဘောသဘာဝနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ကိုက် ညီလှပေသည်။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ မော်တော်ယာဉ်လောကတွင် ကားပြင် အလုပ်ရုံ(ဝပ်ရှော့)၌ ဦးစီးဦးဆောင် ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နေကြ သည့် စက်ပြင်ဆရာ မက္ကင်းနစ်များ အများစုသည် စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်း၊ နည်းပညာဘွဲ့ရ၊ အေဂျီတီအိုင် ဒီပလိုမာဘွဲ့ရများ မဟုတ်ကြသော်လည်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ်ပြင် ဆင်နိုင်သဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များ လမ်းကြောင်းပေါ် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ငါးဖမ်းသင်္ဘောပေါ် လိုက်ပါ ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်ကို ကောက်ယူထုတ်နုတ်ကြည့်လျှင် ဤစာစုအစပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားခဲ့သည့် အရေးပါလှသော စက်ဆရာသည် ၎င်းတရုတ်သင်္ဘောစက်များကို တရုတ်အမျိုးသား များသာ ပြုပြင်ကိုင်တွယ်နိုင်သဖြင့် လိုက်ပါခွင့်ပြုရန် ဆွေးနွေးချက် သည် အဓိကအချက်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပုလဲနှင့်ငါးသင်္ဘော များဖြင့် အစချီခဲ့သည့် မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွင် မြန်မာကပ္ပတိန်၊ မြန်မာစက်ဆရာ၊ မြန်မာငါးဆရာများဖြင့် စတင်ခဲ့သော ဤပင်လယ်ငါးဖမ်းခရီးသည် နိုင်ငံသားများအတွက် စရိတ်လည်း သက်သာသည်။ နိုင်ငံခြားသား ပါဝင်မှုမရှိသည့်အတွက် ဗီဇာသက် တမ်း စဉ်းစားရန်မလို၊ ငါးဖမ်းရက်ပိုမိုသည်။ ငါးအထိအမိပိုကောင်း သည်ဟု အစားထိုးတွေးခေါ်က လက်တွေ့ကျကျ ဖြစ်တန်စွမ်းများ လှပါသည်။ ထို့အပြင် အင်ဂျင်စက်ကြောင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း နှောင့်နှေးလျှင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့် အင်ဂျင်သက်တမ်း ကုန်နေပြီဖြစ်သော၊ ပြင်ဆင်စရိတ်များစွာကုန်ကျနေသော အင်ဂျင်ဟောင်းများနေရာတွင် လုပ်ငန်းသဘာဝနှင့် ကိုက်ညီသည့် အင်ဂျင်သစ်များ အစားထိုးလဲ လှယ်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မပျက် ရေလုပ်သားများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမပျက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းကျဆင်း ထိခိုက်မှု မရှိစေပဲ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်သို့ ငါးဖမ်းခရီး ထွက်ခွာနိုင်မည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ " လှိုင်းလေပြင်းထန်သော ပင်လယ်ပြင်တွင် လူပျော့လူညံတို့ အတွက်နေရာမရှိ " ဟူသော ဆိုရိုးစကားတစ်ရပ်ရှိရာ လူပျော့ လူညံ့မဟုတ်သော မြန်လူမျိုးတို့အတွက် ပြည်ပမှအတတ်ပညာရှင် များ၏ နေရာတွင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ့ပင် လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအမြင်တင့်၍ ဂုဏ်ဆင့်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြု အပ်ပါသည်။
မော်တော်ကား တင်သွင်းရောက်ရှိလာမှုဟာ ယခု ပထမဆုံးအသုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အချို့ကွဲလွဲချက်တွေတော့ ရှိနိုင်ပါတယ် မူဘောင်အတွင်းက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာတွေကို OSS အဖွဲ့မှာ ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဦးသန်းအောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းများ အစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပြုပြီး ပထမအသုတ်အနေနဲ့ ကားသင်္ဘောရောက်ရှိလာမှုနဲ့ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကို ကားတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ့် သတင်းများနဲ့ပတ်သက်လို့ ကုန်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဆိုင်ရာ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းအောင်နဲ့ ကောမတ်စ်က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်- ကားဟောင်းများကို အစားထိုးလဲလှယ်တဲ့ အစီ အစဉ်အရ သက်ဆိုင်ရာကားပိုင်ရှင်တွေကို တင်သွင်း ခွင့်ပါမစ်များ ထုတ်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ အစီအစဉ်အရ စုစုပေါင်းကားအစီးရေ ဘယ်လောက် တင်သွင်းမယ်လို့ ခန့်မှန်းပါသလဲ။ ကားဟောင်းများ အစားထိုးလဲလှယ် တဲ့ အစီအစဉ်အရ ယာဉ်ဟောင်း " ပ"နံပါတ်အထိ အစားထိုးလဲလှယ်တင် သွင်းမှုကိုစုစုပေါင်းကားစီးရေ ၅သောင်း ကျော်တယ်လို့ ကုန်းလမ်းပို့ ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရပါတယ်။ Used Car Sales Centers တွေ မကြာခင်မှာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ အထိ ဘယ်နှစ်ဦးခန့် ဖွင့်ဖို့ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးထားပြီးပါသလဲ။ လတ်တလော ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ နေပြည်တော်မှာ Sales Centers ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက် မြေပြင်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ များ သွားရောက်စစ်ဆေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အချက်အလက် ပြည့်စုံစွာတင်ပြ လာတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း ဆက် လက်စစ်ဆေးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကို လောလောဆယ် ကားတင်သွင်းခွင့် ပြုနေပြီလို့ အကြမ်းဖျင်း သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုမူတွေနဲ့ ခွင့်ပြုပြီး ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ လိုအပ်ပါသလဲ။ ပြည်ပပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းနဲ့အထက် ပြည်ပပို့ကုန်တင်ပို့ထားနိုင်လျင် ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်တွေကို မော်တော်ယာဉ် တစ်စီးစီ တင်သွင်းခွင့်ပြုဖို့ ပထမအဆင့် အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ နဲ့ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ဘဏ္ဍာ နှစ်တွေမှာ ကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းနဲ့ အထက် ပြည်ပတင်ပို့နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်း ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယ အဆင့်အနေနဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရော ကားတင်သွင်းခွင့် ပြုမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်တော့လောက် စတင်ပါမလဲ။ ဘယ်လိုမူတွေနဲ့ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် ကို သိပါရစေ။ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပြီးသွားရင် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်း ဆက်စဉ်းစားပေးဖို့ အစီအစဉ်တော့ ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုမူတွေနဲ့ ခွင့်ပြုနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့က ညှိနှိုင်းသုံးသပ်ပြီး ချထားပေးတဲ့ မူအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်က ရောက်ရှိလာတဲ့ ကားသင်္ဘောမှာ ပါလာ တဲ့ အစားထိုးယာဉ်ကို လဲလှယ်ရေးပါမစ်နဲ့ သွင်း လာတဲ့ ကားတွေထဲမှာ မူလတင်သွင်းစဉ်က ပါတဲ့အချက်တွေနဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ၎င်းကိစ္စအပေါ် ဘယ်လို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါသလဲ။ မော်တော်ယာဉ်အဟောင်းနဲ့အစား ထိုးလဲလှယ်တဲ့အစီအစဉ်အရမော်တော် ကားတင်သွင်းမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ ဘဏ်၊ အကောက်ခွန် စတဲ့ အထူးပါမစ်ထုတ်ပေးရေး OSS အဖွဲ့မှ ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ မော်တော်ကားတင်သွင်းရောက်ရှိလာမှုဟာ ယခု ပထမဆုံးအသုတ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အချို့ကွဲလွဲချက်တွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ မူဘောင်အတွင်းက ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်တာတွေကို OSS အဖွဲ့မှာ ညှိနှိုင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားတင်သွင်းသူများအနေနဲ့ အခက်အခဲ ရှိရင် တင်ပြနိုင်ပါတယ်။ MIRT
ကမ္ဘာ့ဆန်ကုန်သွယ်မှုမှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်တင်ပို့နေတဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံ မှာ အဆိုးဝါးဆုံး ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ် နေတဲ့အတွက် နိုင်ငံရဲ့ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၊ စက်မှုကဏ္ဍ၊ ခရီးသွားကဏ္ဍ စတဲ့ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှု များစွာ ဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တော့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဆန်တင်ပို့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအနေအထားတွေအရ နိုင်ငံ တကာ ဆန်လေ့လာဆန်းစစ်သူများနဲ့ ကုန်သည်များက ကမ္ဘာ့ဆန်ဈေး အမြင့် ဘက် တက်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းမှုတွေ ရှိနေသလို အချို့သော သူများကလည်း အာရှနိုင်ငံအချို့ ရေကြီးလို့ သီးနှံ အထွက် လျှော့တယ်ဆိုပေမဲ့ အခြား ဆန် ထုတ်လုပ်တဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်တို့မှာ ဒီနှစ် သီးနှံ အထွက်ပိုမယ့်အပြင် ကမ္ဘာ့ အနောက် ခြမ်းက အမေရိကန်၊ ဘရာဇီးနဲ့ အီတလီ တို့မှာလည်း ဒီနှစ် သီးနှံ အခြေအနေ ကောင်းပြီးတင်ပို့မှုပိုမယ့် အလား အလာများအရ ကမ္ဘာ့ဆန်ဈေးကွက် က အစောပိုင်းကထင်သလို ဈေးမြင့် တက် မလာနိုင်ပါဘူးလို့လည်း ခန့်မှန်း ကြပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကတော့ လက်ရှိ အချိန်ထိ ထိုင်းနိုင်ငံရေကြီးမှု ကြောင့် ပြည်တွင်း ကုန်ဈေးနှုန်းကို သက်ရောက်မှု မရှိပါဘူးလို့ နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းမှာ ပြောထားပါတယ်။ မိမိတို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ရော အာရှ ရေကြီးမှု ဂယက်ကြောင့် ဆန်ဈေးကွက်ကို သက် ရောက်နိုင်မှု အလားအလာရှိ၊ မရှိ ဆိုတာကို သုံးသပ်နိုင်ဖို့ ဆန်ထုတ်လုပ်၊ တင်ပို့၊ တင်သွင်းနိုင်ငံ တချို့ရဲ့ လတ်တလောအခြေအနေတွေနဲ့ ဆန်ကုန် သည်ကြီးများရဲ့အမြင်ကို လေ့လာ ကြည့်ရအောင်ပါ။ အာရှနိုင်ငံများအတွင်း ရေလွှမ်းမိုးမှု ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်း (FAO)မှ ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာ အရ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် အာရှနိုင်ငံ များ အတွင်းပျက်စီးမှုဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ အနေနဲ့ စုစုပေါင်း စိုက်ဧရိယာရဲ့၁၂ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်တဲ့ ဟက်တာ ၁ ဒသမ ၆ သန်းထက် မနည်းပျက်စီးတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး ကမ္ဘော ဒီးယားနိုင်ငံမှာ စုစုပေါင်းစိုက်ပျိုးမှုရဲ့ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖိလစ်ပိုင်မှာ လယ်မြေ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဗီယက်နမ်မှာ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ပျက်စီးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရေကြီးလို့ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ စပါးလေးပုံတစ်ပုံဆုံးရှုံး နှစ် ၅၀ ကျော်အတွင်း အဆိုးဝါး ဆုံး ရေကြီးမှုကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ အဓိက စပါးသီးနှံ လေးပုံတစ်ပုံခန့် ဆုံးရှုံးနိုင်လို့ အစောပိုင်း ခန့်မှန်းထားတဲ့ စပါးအထွက် တန်ချိန် ၂၅သန်းထဲက ၆သန်း ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး တန်ချိန် ၁၉ သန်းခန့်သာ ထွက်ရှိနိုင်တယ်လို့ စိုက်ပျိုးရေး ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးရုံး အကြီးအကဲ ဖြစ်သူမှ ပြောကြားပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် အစိုးရ တရားဝင်ပြောကြားချက်အရ သိုလှောင်ရုံ ၃၅ လုံးနဲ့ဆန်စက်များ ရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီး ပျက်စီးတဲ့ ဆန်တန်ချိန် ပမာဏကိုတော့ မသိရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုရေကြီးမှုတွေရှိနေတဲ့တိုင် လက်ရှိအချိန်ထိ ထိုင်းနိုင်ငံက ဆန်တန် ချိန် ၉ ဒသမ ၅ သန်းခန့် တင်ပို့ပြီး ဖြစ်လို့ ယခုနှစ်အတွင်း ဆန်တန်ချိန် ၁၁ သန်းအထိ တင်ပို့နိုင်မယ်လို့ အစိုးရက ခန့်မှန်းထားပြီး ပြည်တွင်းဆန်တင်ပို့သူ များ ခန့်မှန်းတာတော့ လာမယ့်နှစ်မှာ ဆန် တင်ပို့မှု ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းပြီး တန်ချိန် ၇-၇ ဒသမ၅သန်း သာ တင်ပို့နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေကြီးမှုကြောင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်မှု အခက်အခဲများဖြစ်ကာ ဆန်တင်ပို့မှု ကြန့်ကြာ နှောင့်နှေးလျက်ရှိရာ ရေကျဆင်းမှုနှေးတဲ့အတွက် နောက်တစ်လ အထိ ကြန့်ကြာမှုရှိနိုင်တယ်လို့လည်း ဆန်တင်ပို့သူများအသင်းက ပြောကြား ပါတယ်။ အစိုးရဆန်စပါးဝယ်ယူတဲ့ အစီအစဉ်မှာ အောက်တိုဘာ လလယ် အထိ စပါးတန်ချိန် ၅၀၀၀၀ ခန့်သာ ရောင်းချမှု ရှိတယ်လို့ ထိုင်းအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားပါတယ်။ ဗီယက်နမ် ရေကြီးလို့ ဆန်ထုတ်လုပ်မှု ကို မထိခိုက်ဘူးလို့ဆို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာ ယခုနှစ် ဆန်တင်ပို့ဖို့ တန်ချိန် ၇ ဒသမ ၅ သန်းကို အစောပိုင်းမှာ လျာထားခဲ့ပြီး အောက် တိုဘာ ၁၉ ရက်မှာတော့ တန်ချိန် ၇ သန်းကျော်ကို လျှော့ချခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဆန်ဝယ်လက်များ ဟာ ထိုင်း အစိုးရ ဆန်စပါးဝယ်ယူရေး စီမံချက်အရ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတဲ့ အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရေကြီးမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေအရ အဝယ်နှေးထားသလို အချို့ ဝယ်လက်များ ကလည်း ဈေးသက်သာတဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်ဆန်ကို ဝယ်ယူဖို့ စိုင်းပြင်းနေတဲ့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် များအတွင်း ရောင်းချမှုနည်းတဲ့ အခြေ အနေတွေအရ အဲဒီလို လျာထားချက်ကို လျှော့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေနစ်မြုပ်လို့ ဆန်ထုတ်လုပ်မှုကို မထိ ခိုက်နိုင်ဘူးလို့လည်း ပြောထားပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ စပါးစိုက်ဧရိယာ၊ ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ တင်ပို့မှုတန်ဖိုး တို့ဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် ရေလွှမ်းမိုးပြီး ထိခိုက်မှုများကြောင့် လာမယ့်နှစ်မှာ စိန်ခေါ်မှု အခက်အခဲများနဲ့ ရင်ဆိုင် လာရနိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အိန္ဒိယ်ဆန်တင်ပို့မှု တိုးမြှင့်ဖို့ ကြိုးစား စက်တင်ဘာ ၉ ရက်က စတင်လို့ ဆန်ပြည်ပတင်ပို့ခွင့်ပြုပြီး ဆန် တင်ပို့သူများဟာ ဘာစမာတီ မဟုတ်တဲ့ ဆန်တန်ချိန် ၂၅၀၀၀၀ ခန့်ကို တင်ပို့ ခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာလနဲ့ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း မှာလည်း တစ်လကို တန်ချိန် ၂၅၀၀၀၀ နဲ့ ၃၀၀၀၀၀ အကြား တင်ပို့နိုင်မယ်လို့ ကုန်သည်များက ပြောကြားပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ဆန်သိုလှောင် လက်ကျန်တွေ ပြည့်နေတဲ့အပြင် လက်ရှိ နွေစပါးကိုလည်း ယခင်နှစ်ထက် ပိုစိုက်ဖို့ လျာထားတဲ့အတွက် အိန္ဒိယဆန်တန်ချိန် ၂ သန်း ၃ သန်း လောက် နိုင်ငံ တကာ ဈေးကွက်ကို ဒီနှစ်အတွင်း ထုတ်ရောင်းမယ့် အနေအထားရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယဆိပ်ကမ်းများ တိုးမြှင့်တင်ပို့ဖို့ အခက်အခဲတွေကြောင့် တင်ပို့မှုနှေးကွေးကာ ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမြင့်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်းရေကြီးမှုအတွက် ရရှိတဲ့အခွင့် အလမ်းကို ပါကစ္စတန်ရယူဖို့ပြင်ဆင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် လယ်မြေဧကများစွာ ပျက်စီးပြီး အနာဂတ်မှာဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်း လာနိုင်တဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ အပေါ် ပါကစ္စတန် ဆန်တင်ပို့သူများဟာ အဲဒီ အခွင့်အလမ်းကို အမိအရယူပြီး ဆန် တင်ပို့မှု ကဏ္ဍမှ အကျိုးအမြတ်များစွာ ရရှိလာနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာ ဈေး ကွက်များအတွင်းသို့ ဆန်များ တိုးမြှင့် တင်ပို့သွားဖို့ ကြိုးပမ်းလာကြပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်း အတွင်း သင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ ပါကစ္စတန်ဆန်ဝယ် လက်များကို ဆန်များ တိုးမြှင့် တင်ပို့ခြင်းဖြင့် အကျိုးထူးခံစားနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိတယ်လို့ ဆန်တင်ပို့သူများက ပြောကြားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် စပါးတန် ချိန် ၂၅၀၀၀၀ ခန့် ပျက်စီးသလို ဆည် မြောင်းများလည်း ပျက်စီးခဲ့လို့ လတ် တလော ဆန်တင်ပို့မှု နှေးကွေးနေပါတယ်။ ပြည်တွင်းလျှပ်စစ်မီးများ ပြတ် တောက်မှုများရှိလို့ ဆန်စက်လည်ပတ်မှု နှေးကွေးနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားလယ်မြေအချို့ပျက်စီးပေမဲ့ ဆနတင်ပို့မှုကို မထိခိုက်နိုင် ၂၀၁၁ ပထမ ၉ လအတွင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဆန်တင်ပို့မှု ကဏ္ဍက ဝင်ငွေရရှိမှုဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၆၄ ဒသမ ၄ သန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်လို့ ကမ္ဘောဒီးယားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက တရားဝင်စာရင်းများအရ သိရပါတယ်။ ယခင်နှစ် စက်တင်ဘာလ အထိ ဆန်တင်ပို့မှုကရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၂၂ သန်း ဖြစ်လို့ ယခုနှစ် ကာလတူမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၄၆ သန်း တိုးမြှင့်ရရှိလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ ဆန်တန်ချိန် ၁ သန်းတင်ပို့ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ ဒီနှစ် ရေနစ်မြုပ်မှုကြောင့် စပါးဟက်တာ ၂ ဒသမ ၄ သန်း စိုက်ပျိုးထားတဲ့အနက် ယခုအချိန်ထိ ဟက်တာ ၁၈၀၀၀၀ ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့ နိုင်ငံရဲ့ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုနဲ့ ဆန်တင်ပို့မှု မူဝါဒကို ထိခိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း၊ ရေကျသွားတာနဲ့ ရေနစ်မြုပ် တဲ့ တောင်သူများအမြန်ဆုံးကို မျိုးစေ့ဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားဆန်ဝယ်ယူမှုကို အိန္ဒိယနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားသို့ပါ တိုးချဲ့ဝယ်ယူ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ဆန်ရောင်းနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ်တို့မှသာ ဆန်ရောင်းချ ဖို့ ဆွေးနွေးနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်ပြည့်မီဖို့နဲ့ ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ဈေးသက် သာတဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားမှလည်း ဝယ်ယူဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဘာစမာတီမဟုတ်တဲ့ဆန် တန်ချိန် ၅ သိန်း ဝယ်ယူဖို့ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရ လေ့လာရေးအဖွဲ့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ ဝန်ကြီး ကေဗွီသောမတ်စ်နဲ့ ဆန်ဝယ်ယူ ရေး အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့ သက်သာတဲ့ ဈေးနှုန်း တစ်ကီလို ရူပီး ၂၀ ဒသမ ၄၅ (တစ်တန် ကန်ဒေါ် လာ ၄၁၈) ဝန်းကျင်ဖြင့် ရောင်းချဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ဆန်များဝယ်ယူတင်သွင်းဖို့ ကုန်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ စာချုပ်တစ်ခု ချုပ်ဆိုထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ပြည်တွင်းဆန်လုံလောက်လို့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်က ဆန်ပိုမိုတင်သွင်းဖို့ မလိုပေမဲ့ နယ်စပ်မှ အိန္ဒိယဆန်များ ဝင်ရောက် ပြည်တွင်းဆန်သိုလှောင်မှုနဲ့ လုံလောက်လို့ ဆန်ပိုမိုတင်သွင်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကုန်သွယ်ရေးဌာနက ပြောကြား ပါတယ်။ ယခင်နှစ်က ဆန်အမြောက်အမြား တင်သွင်းခဲ့ခြင်းနဲ့ အထွက် ပိုမိုခဲ့တဲ့အတွက် ယခင်နှစ်ထက် နှစ်ဆခန့်များတဲ့ ဆန်သိုလှောင်လက်ကျန်တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၃ သန်းခန့်ရှိနေပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ပြည်တွင်းမှာ တန်ချိန် သန်း ၃၀-၃၃ သန်းခန့်ထုတ်လုပ်ပြီး သီးနှံထွက်ရှိမှုအပေါ် မူတည်ပြီး တန်ချိန် ၁ ဒသမ ၇ သန်းအကြား တင်သွင်းနေရရာ ယခုနှစ်မှာ တန်ချိန် ၇၅၀၀၀၀ ခန့် တင်သွင်းရနိုင် တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ နယ်စပ်မှ အိန္ဒိယဆန် တွေ ရောင်းချလျက်ရှိရာ နေ့စဉ် ဟီလီဆိပ်ကမ်းကို ကုန်တင်ကား ၁၀ စီးမှ ၁၂ စီးကြားဝင်ရောက်ပြီး အခြားဆိပ်ကမ်းများမှလည်း ဝင်ရောက်မှုရှိတယ်လို့ ဆန်တင်သွင်းသူတစ်ဦးက ပြောကြားပါတယ်။ မလေးရှားအနာဂတ်ဆန်မပြတ်လက်ရေး ဗီယက်နမ်နဲ့သဘောတူညီ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဆန်ပြတ်လပ်တဲ့အခါတိုင်း ထောက်ပံ့ဖို့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ဆန်တန်ချိန် ၈ သိန်းရောင်းချရေး ဗီယက်နမ် အာဏာပိုင်များနဲ့ မလေးရှားဆန်ဝယ်ယူရေး အေဂျင်စီ ဘားနပ်တို့ နားလည်မှု စာချွန်လွှာရေးထိုးထားကြောင်း သိရပါတယ်။ မလေးရှား နိုင်ငံဟာ ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွက် ဗီယက်နမ်မှ ၄၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ ပါကစ္စတန်မှ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အခြားနိုင်ငံ များမှ ၂ ရာခိုင်နှုန်းစီ တင်သွင်းရပါတယ်။ ယခင်နှစ်က တန်ချိန် ၉၃၅၀၀၀ ခန့် တင်သွင်းခဲ့ပြီး ယခုနှစ် နိုင်ငံတော် အရန်ဆန်ဖြည့်တင်း ရန် တင်သွင်းမှု ပမာဏ တိုးမြှင့်ရဖွယ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မုန်တိုင်းနှစ်လုံးဝင်ရောက်ပေမဲ့ ဆန်တန် ၅ သိန်းထင် ပိုမသွင်းလို့ ဖိလစ်ပိုင်ဆို မုန်တိုင်းများဝင်ရောက်ပြီး စပါးပျက်စီးမှုများရှိခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံအနေဖြင့် ၎င်းရဲ့ဆန်တင်သွင်းမှုပမာဏနဲ့ ဝယ်ယူမှုစတင်မယ့် ကာလကို နိုဝင်ဘာလမှာ ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိ ကာလမှာ ပြည်တွင်းဆန် ဖူလုံမှုရှိနေပါတယ်။ ၂၀၁၂ တိုင်အောင် ဆန်တင်သွင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ဆန်တန်ချိန် ၅ သိန်းထက်ပိုပြီး တင်သွင်းမှာ မဟုတ်ကြောင်း သတင်းများလွှင့်ထုတ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့သော လေ့လာဆန်းစစ်သူများကတော့ ဒီလအတွင်း ဆန်တင်သွင်းမယ့်ပမာဏကို တိုးမြှင့်ပြင်ဆင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်း ခန့်မှန်း ထားပါတယ်။ အာဖရိကမှာ ဆန်ဝယ်ယူမှုအများဆုံး နိုက်ဂျီးရီးယားက ဆန်တင်သွင်းမှု ပိတ်ပင်နိုင်ဖို့ကြိုးစား အာဖရိကမှာ ဆန်အများဆုံးတင်သွင်းတဲ့ နိုက်ဂျီးရီးယားဟာ ၄ နှစ်အတွင်း ဆန်တင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပင်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကို ဆန်တန်ချိန် ၄၂၀၀၀၀ တိုးမြှင့်ပြီး ၂၀၁၂ ပထမ ၃ လအတွင်း ဆန်စက် ၁၄ လုံးကို အပြီးသတ်တည်ဆောက် သွားရန် မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းစပါးဆန်ဈေးကွက် အသစ်ဝင်လို့ ဈေးအေး ထိုင်းနဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိမိုးစပါးအသစ်များထွက်ပေါ်စပြုနေပြီဖြစ်ပြီး ထွက်ရှိမှုအနေနဲ့ အချို့ဒေသတွေမှာ မိုးများပြီး ရေနစ်မြုပ်လို့ စပါးခင်းတွေ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးမှုရှိခဲ့သလို အချို့ မှာလည်း စိုက်ပျိုးဖို့ အချိန်မမီလို့ စိုက်ဧကလျော့တဲ့အခြေအနေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအနေအထားကို ခြုံကြည့်ရင်တော့ ထုတ်လုပ်ပိုလျှံမှုက သိသိသာသာမလျော့နိုင်ဘူးလို့ အများက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ပြည်တွင်း ဆန်စပါးဈေးကွက်အနေနဲ့လည်း မိုးဆန် အသစ်တွေဝင်လာစပြုနေပြီဖြစ်လို့ ဈေးအေးနေတဲ့ သဘောရှိနေပါတယ်။ မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက်အပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှု သူတို့အတွေးအမြင်များ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာ မြန်မာ့ဆန်ဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံရဲ့ သက်ရောက်နိုင်မှု အလားအလာတွေကိုတော့ လက်တွေ့ ဆန်စပါးနယ်ပယ်မှာ လုပ်ရှားနေတဲ့ ဆန်တင်ပို့သူများရဲ့ အမြင်များ ကိုလည်း တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဧရာရွှေဝါကုမ္ပဏီမှ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာဦးလူမော်မြင့်မောင်ရဲ့အမြင်ကို ပြောကြားရာမှာ " အာရှမှာ ရေနစ်မြုပ်မှုကြောင့် လက်ရှိမှာ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို ထိခိုက်မှု မရှိတဲ့ အပြင် အကျဘက်ကို ဆင်းနေတဲ့ သဘောရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဆန် ဈေးကွက်မှာတောင် ပြောင်းလဲမှုမရှိလို့ မြန်မာဆန်ဈေးကွက်ကိုလည်း သက်ရောက်မှု မရှိသေးပါဘူး။ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့ ထိုင်းစပါးဝယ်ယူရေး စီမံကိန်းကြောင့် လတ်တလောမှာ ဝယ်လက်တွေက ဈေးကွက် အနေအထားကို စောင့်ကြည့်တဲ့သဘောရှိနေလို့ ဝယ်လိုအားပျောက် နေတဲ့ အနေအထားရှိနေပါတယ်။ ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ်တို့က ဆန်ဈေးတင်တဲ့အချိန် အိန္ဒိယက ဈေးကွက်ထဲလျှော့ဈေးနဲ့ ထုတ်ရောင်းလာ တဲ့အတွက် အခုဆိုရင် အာဖရိကဈေးကွက်ကို ရောင်းဖို့တောင် ခက်ခဲ နေပါတယ်။ ဝယ်လက်တွေက ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ထုတ်ရောင်းမှုအခြေ အနေကို စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပြီး လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ လောက် မှာတော့ နိုင်ငံတကာဈေးကွက် အကောင်းဘက်ကို ရောက်လာနိုင် တယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး " အဲဒီလို ပြည်ပဝယ်လိုအားတွေတက်လာလို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဆန်တွေတိုးတက်တင်ပို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာ့ ဆန်အရည်အသွေးကိုထိန်းပြီး ပုံမှန်တင်ပို့နိုင်အောင် ပြင်ဆင်စရာရှိတာ တွေ ဆောင်ရွက်ဖို့တော့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ အခုဆိုရင် အာဖရိက ကို အိန္ဒိယဆိပ်ကမ်းက ဆန်တင်ပို့မယ်ဆိုရင် မြန်မာဆိပ်ကမ်းက တင်ပို့တဲ့ စရိတ်ထက် ဒေါ်လာ ၂၀ လောက် သက်သာတယ်။ နောက် ပြီး မြန်မာဆိပ်ကမ်း မှာကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခါတစ်ရံ ကုန် ကြပ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ သင်္ဘောတွေက ပင်လယ်ဝမှာ စောင့်ဆိုင်းပြီး နေရတဲ့အတွက်လည်း တင်ပို့တာကြန့်ကြာမှုရှိပြီး သင်္ဘောငှားရမ်းတဲ့ အခါ ကုန်ကျစရိတ်ပိုပါတယ်။ အဲဒီလိုကုန်ကျစရိတ်တွေ သက်သာဖို့နဲ့ သင်္ဘောငှားရမ်းမှု အဆင်ပြေစေဖို့၊ အချိန်တိုအတွင်း တင်ပို့နိုင်ဖို့ဆိုရင် လက်ရှိဆိပ်ကမ်းတွေရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦတွေကို တိုးမြှင့်ဖို့လို သလို ဆိပ်ခံတံတားတွေကိုလည်း ပိုမိုတိုးချဲ့ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် ဆန်အရည်အသွေး နိမ့်ကျလို့ တစ်ဘက်ဝယ်သူနဲ့ စကားပြောရတာမျိုး၊ အရည်အသွေးနိမ့်လို့ ဈေးလျှော့ရတာမျိုးမရှိရအောင်လည်း ဆန်တင်ပို့သူများအနေနဲ့ မိမိတို့ကုန်ကို အရည်အသွေးထိမ်းဖို့လိုသလို ကုန်ပစ္စည်း စစ်ဆေးတဲ့ အေးဂျင့်များအနေနဲ့လည်း တိကျတဲ့စည်းကမ်း အတိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန် စစ်ဆေးထောက်ခံပေးဖို့တော့ အကြံပြုဖို့ လိုပါတယ်" လို့၎င်းရဲ့အမြင်ကို ဆွေးနွေးပါတယ်။ အောင်နိုင်သစ္စာကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ဇော်ဦး ကလည်း " လက်ရှိဆန်တစ်တန် FOB ဈေး ကန်ဒေါ်လာ ၃၆၅- ၃၇၅ ပဲရှိပါတယ်။ ဆန်စာချုပ်အသစ်မရှိသေးပါဘူး၊ စာချုပ် အဟောင်းတွေကိုပဲ တင်ပို့နေတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံ တကာဈေးကွက်အခြေအနေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် အိန္ဒိယကလည်း စပါးအထွက်ပိုလို့ ဆန်ပိုရောင်းမယ့်အခြေအနေအရ နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ကို အိန္ဒိယဆန်တန် ၂-၃ သန်း တကယ်ရောင်းမယ်၊ ထိုင်း ကလည်းသူ့ရဲ့ သက်တမ်းကြာအရန်ဆန်တွေကို အစိုးရအချင်းချင်း ရောင်းဖို့ စီစဉ်နေတယ်၊ နောက်ပြီး အီးယူဈေးကွက်မှာလည်း အီတလီ ဆန်တွေ အပြည့်နေရာယူမယ့်အနေအထားရှိနေတယ်၊ ဒီလို အကြောင်းရင်းတွေရှိနေလို့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ ဆန်မရှားနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ နာဂစ်ဖြစ်တုန်းက စပါးတွေပျက်စီးပြီး ဆန်ဈေးတက်မယ်လို့ အများက ခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမဲ့ အဲဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးရော ၂၀၀၉ တစ်နှစ်လုံးပါ ဈေးမတက်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ထိုင်းရေစိုဆန်တွေကလည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ သုံးလို့ရနေအုံးမှာဖြစ်လို့ ရေစိုဆန်တွေကို ပြည်တွင်း ရော ပြည်ပဈေးကွက်တွေကိုပါ အနိမ့်ဈေးနဲ့ ထုတ်ရောင်းမယ့်အလား အလာရှိတာကလည်း ဈေးနှုန်းကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အာဖရိကမှာလည်း မနှစ်ကထက်စာရင် သီးနှံပိုထွက်တဲ့သတင်းတွေ အရ ဝယ်လိုအားနည်းနေတဲ့အတွက် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအထိတော့ ဆန်ဈေးမတက်နိုင်ဘူးလို့ ခန့်မှန်းပါတယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး " ပြည်တွင်းအနေအထားအရ လက်ရှိမှာ အချို့ ဆန်တင်ပို့သူအနည်းစု ဆန်၊စပါး ဝယ်ယူမှုရှိနေပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ လောက်မှာ ဝယ်လိုအားပြန်ကောင်းလာလို့ ပြည်ပကို တင်ပို့ရမယ် ဆိုရင် ပြည်တွင်းဈေးကွက် ပုံမှန်ကောင်းနိုင်ပေမဲ့ တင်ပို့မှုနည်းရင် တော့ တောင်သူတွေ နွေစပါးစိုက်ပျိုးမှုလျှော့ပြီး အခြားသီးနှံတွေ ပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးလာနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က လက်ရှိဆန်အသစ်တွေ ဈေးအေးရတာက အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကြောင့်လည်း တစ်ကြောင်းပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ စပါးခြွေလှေ့စက်တွေ၊ စပါး အခြောက်ခံစက်တွေ အသုံးပြုနေပြီဆိုပေမဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာနဲ့စက်မှုလယ်ယာစနစ်အဖြစ်ရောက်ရှိဖို့က အစသာရှိပါသေး တယ်။ ဒါကိုလည်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ဆန် တွေ တင်ပို့နိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်လို့ '' အကြံပြုပြောကြားပါတယ်။ ဆန်တင်သွင်းနိုင်ငံများမှ တုံ့ဆိုင်းနေချိန် ဆန်ထုတ်လုပ်နိုင်ငံမားက တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ် အာရှနိုင်ငံများအတွင်း အဆိုးဝါးဆုံး ရေနစ်မြုပ်မှုကြောင့် အဓိက ဆန်တင်ပို့သည့် ထိုင်းနိုင်ငံထိခိုက်နစ်နာမှုများ ကြီးမားလို့ ဆန်တင်ပို့မှု လျော့ကျနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန်ဈေး တစ်တန် ကန်ဒေါ်လာ ၇၅၀ ဝန်းကျင်ထိ မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ အချို့ကုန်သည်များက ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လတ်တလော ဆန်တင်သွင်းမှုဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ ဈေးသက်သာတဲ့ အိန္ဒိယနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းဖို့ ဆောင်ရွက်နေသလို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကလည်း ဆန်တင်သွင်းမှုကို တုံ့ဆိုင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်အများဆုံး ထုတ်လုပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ လက်ရှိ မှာ ဆန်သိုလှောင်လက်ကျန်များစွာရှိနေသလို လာမယ့်နွေစပါး ပိုမိုထွက်ရှိဖို့လည်း အနိမ့်ဆုံးထောက်ပံ့ဈေးနှုန်း တိုးမြှင့်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ အလားတူ ဆန်ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံများစွာတို့ဟာလည်း ထုတ် လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ အစိုးရထောက်ပံ့မှု အစီအစဉ်များအပါအဝင် နည်းလမ်းများစွာနဲ့ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက တင်ပို့မှု ကျဆင်းတဲ့ ပမာဏကို ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်တို့က ပြန်လည် ဖြည့်ဆည်းပေးနေသလို အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်တို့က သူ့ထက် အပြင် အနိမ့်ဈေးနဲ့ ကမ်းလှမ်းနေခြင်းတွေက ဆန်ဈေးကွက်အတွင်း ဈေးမတက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရိုက်ခက်လာနိုင်တာတွေကို စောင့်ကြည့် ထိန်းသိမ်းဖို့တော့လို ထိုင်းနိုင်ငံရေနစ်မြုပ်မှုကြောင့်လတ်တလောမှာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက် ကိုလည်း ရိုက်ခတ်မှုနည်းသလို ပြည်တွင်းဆန်ဈေးကွက်မှာ လည်း သက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ ဆိုရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အရန် ဆန်တွေ ထုတ်ရောင်းလာခြင်းနဲ့ ဗီယက်နမ်၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်တို့ ကလည်း ဈေးကွက်ကို အပြိုင်ရောင်းချမှုတွေရှိလာတဲ့အချိန် မြန်မာဆန်ဈေးကွက်က တင်ပို့မှု အရှိန်မပျက်ရအောင် အရည်အသွေး ထိန်း ချုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တောင်သူတွေ စပါးစိုက်ပျိုးမှုလျော့ကျမသွားရေး ဆန် တင်ပို့မှုမလျော့ဖို့လိုသလို သီးနှံပေါ်ချိန် တောင်သူများ ထိုက်သင့်တဲ့ အကျိုး အမြတ်ရမယ့် ဈေးနှုန်း ဖြစ်ဖို့လည်း ထိန်းညှိရမယ့် အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ထိုင်းစပါးဝယ်ယူရေး စီမံကိန်းကြောင့် ဈေးပိုတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှတစ်ဆင့် မြန်မာဆန် တွေ မှောင်ခိုသွားခြင်းဖြင့် ဆန်အထွက်ပမာဏ ခန့်မှန်းမရဘဲ ပြည် တွင်း စားသုံးသူဈေးကွက်ကို မထိခိုက်ရအောင်လည်း စောင့်ကြည့် ရမယ့် အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း။
ကမ္ဘာနှင့် အဝှမ်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရသော ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ ရေစီးကြောင်းများ ပြောင်းလဲလာခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်း၊ ကုန်းတွင်းပိုင်းရေချို ဒေသသို့ ရေငန်ဝင်ရောက်မှုများ များ ပြားလာခြင်း၊ ရေချိုရရှိမှုနည်းပါးခြင်း ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးများထိခိုက်လာကာ ရေနေ သတ္တဝါများတွင် ငါးနေ၊ ငါးထိုင်ပျက် ပြားခြင်း၊ ရေစီးရေလာနှင့် ငါးတက်၊ ငါးဆင်းလမ်းကြောင်းများ ပျက်ယွင်း လာခြင်း၊ ငါးများ နေထိုင်ခိုအောင်း ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းရာရေပြင်၊ ရေကန်၊ ရေရိုး၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်းအိုင်များ (habitat) တွင် ငါးစာပြင်(feeding ground) များ ဆုတ်ယုတ်လာခြင်း စသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ရေနေသတ္တဝါများသည် ၎င်းင်းတို့၏ ဘဝစက်ဝန်းတစ်လျှောက် အစာ အတွက် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း(feeding migration)၊ မျိုးပွားရန်အတွက် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း (spawning migration) နှင့် ဆောင်းခိုရန် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း (over wintering migration) စသည့်ရွှေ့ ပြောင်းခြင်း (၃)ရပ်ဖြင့် နေ ထိုင်ကျက် စားလေ့ရှိရာ ငါးတို့၏ သဘာ၀ အခြေအနေကို ကျွမ်း ကျင် ပိုင်နိုင်စွာ သိရှိထား မှသာလျှင်ငါးဖမ်း ဆီးခြင်း လုပ်ငန်း၌ ငါးအထိ၊ အမိ ပိုမိုလာနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ မိုးနှောင်းရာသီ(post monsoon) ဖြစ်သော (သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာလ)များတွင် ဆောင်းဦး ရာသီကို ကူးပြောင်း ရောက်ရှိတော့ မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေသတ္တဝါများက သဘာဝအသိမှ ရရှိသဖြင့် အုပ်စု လိုက် နေတတ်သော ငါးမျိုးစိပ် အချို့သည် ဆောင်းခိုရန်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို စတင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ဆောင်ရွက် ရာ၌ အချို့ငါးမျိုးများသည် ရေချိုတွင် လည်းကောင်း၊ အချို့မှာ ရေချို ဒေသမှ ရေချို/ရေငန်စပ်ဒေသသို့လည်းကောင်း၊ ရေငန်မှ ရေချိုသို့ လည်းကောင်း စုန် ဆင်းဆန်တက်ခြင်း၊ ရေစီးကြောင်းနှင့် အတူ မျောပါခြင်း၊ အလေ့အထ အမျိုး မျိုး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ပုဇွန်တောင်ချောင်းအတွင်း အုပ်စု လိုက် နေထိုင်သော ငါးဇင်ရိုင်းများ ရေပေါ်ဆန်တက် ကူးခတ်မှုသတင်း ဖြစ်စဉ်သည်ငါးတို့၏ သဘာဝနေထိုင် ကျက်စားရင်း ၎င်းင်းကြိုက်နှစ်သက်မှု မရှိ သော သဘာ၀၀န်းကျင်ကို ရင်ဆိုင်ရ ချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်မှုပင်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ ရှိရပါသည်။ ဒီရေအတက်အကျရှိသော ပုဇွန် တောင်ချောင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင် မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများပြားခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် မြို့ပြလူနေမှုစနစ်ကြောင့် ရေထုညစ် ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ရေစစ်ချိန် (ရေ အကျဆုံးအချိန်)ဖြစ်ခြင်း၊ မြို့ပြစွန့်ပစ် ပစ္စည်းများကြောင့် အနည်ကျရွှံ့နွံများ ပြားပြီး ရေသတ္တဝါများ နေထိုင်ကျက် စားရန် ရေလွှာ၊ ရေထုနည်းပါးလာခြင်း၊ ရွှံ့နွံများကြောင့် ရေနောက်ကျိမှု များ ပြားခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကာ ငါး များ၏ ရွှေ့ပြောင်း ရာလမ်းကြောင်း တွင်အဟန့်အတားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ငါးများသည် အပူချိန် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ရေ၏ချဉ်ဖန်နှုန်း (စံ) ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို ခံ နိုင်ရည်မရှိပါ။ ထို့အတူ ရေထုညစ်ညမ်းခြင်း ကြောင့်ရေတွင်အောက်ဆီဂျင် ပျော်ဝင် မှု နည်းပါးခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင် ပြတ် တောက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်မရှိပါ။ ရေထဲ တွင် ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင် ကို ပါးဟက်မျှင်များမှတစ်ဆင့် စုပ်ယူ ကြရာတွင် ရေနောက်ကျိမှု၊ ရေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ရေစစ် (filter) ကဲ့သို့ ဖြစ်သော ပါးဟက်မျှင်များတွင် ပိတ် ဆို့ မှုဖြစ်ပွားကာ အသက် ရှင်သန်ရပ် တည်ရန် ပိုမိုခက်ခဲစွာ ရုန်းကန်ရလေ့ ရှိပါသည်။ ပုဇွန်တောင်ချောင်းတွင် အုပ်စု လိုက် ရေပေါ်မျောပါနေသော ငါးဇင် ရိုင်းအုပ်သည် သာမန်ထက် ပိုမို ပူပြင်းသော နေအပူချိန်ကြောင့် ရေ အပူချိန် ရုတ်တရက်မြင့်တက်မှုကို ရုတ်တရက် ကြုံတွေ့ရသဖြင့် လည်းကောင်း၊ ငါးဇင် ရိုင်းအများဆုံးတွေ့ရှိရ ခြင်းမှာ ရေပေါ် လွှာနေထိုင်ကျက်စား ငါးဖြစ်ခြင်း၊ အုပ် စုလိုက် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တတ်ခြင်း၊ အောက်ဆီဂျင်ပြတ် တောက်ချိန်တွင်သိုလှောင် အောက်ဆီဂျင် (air bladder) ပမာဏသေးငယ်ခြင်း ကြောင့် လည်းကောင်းဖြစ်ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သုံးသပ်ထားသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့ အလား တူ ဖြစ်ရပ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် သုံးခွမြို့ နယ် သောက်ရေကန်၌ ငါးများ နေ့စဉ် သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကို ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ ရေ/မြေ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ ရာ လွန်ခဲ့သော ၃၅နှစ်တာ ကာလက ပင် ကန် ပြန်ဆယ်တင်မှုမရှိခြင်း၊ ရေကန်အနီး စိုက်ပျိုးထားသော သစ်ပင် များမှ ရွက်ကြွေများ ကန်အတွင်း ကျ ရောက်၍ ဖက်ဆိုးရေအဖြစ် ကာဗွန်ဒိုင်အောက် ဆိုက်ထုတ်လုပ်မှု များပြား ခြင်းကြောင့် တီလားဗီးယား၊ ငါးခူ၊ ငါးရံ့ ကဲ့သို့ ငါးမျိုးများ သေဆုံးသွားခြင်း၊ အဆိုပါ ရွက်ပုတ် ရွှံ့နွံများကို ဖယ်ရှား လိုက်မှသာ ရေထုညစ်ညမ်းမှု မရှိဘဲ ငါးသေဆုံးမှု မရှိတော့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေးယခင် က ငါး ဖမ်းဆီးရာတွင် ငါးများမူးမော် ထိုင်းမှိုင် စေသည့် ထုံး၊ ဘုံလုံသီး၊ ကျီးခေါက်၊ မဟာဂါကဲ့သို့သော သဘာဝထွက် ပစ္စည်းများ ရေတွင်ပျံ့နှံ့စိမ့်ဝင်စေ ခြင်းဖြင့် ငါးဖမ်းခြင်း၊ အင်ဒရင်း၊ ဝါဆေးရည်၊ မာလာသီယွန်ကဲ့သို့သော ငါးများ သေကြေ ပျက်စီးစေနိုင်သည့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ ရေတွင်ပျံ့နှံ့ စီးဆင်းစေခြင်းဖြင့် ငါးဖမ်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း မြစ် ချောင်း၊ အင်းအိုင်များကို မှီခိုနေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်လူထု၊ ကျွဲနွား၊ သားငှက် ထိခိုက်မှုရှိသဖြင့် တရားမဝင်နည်းလမ်း များအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ဥပဒေဖြင့် ကာကွယ်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို အရေးယူခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ သဖြင့် ယခင်ဓလေ့ထုံးစံ ဆေးချ ငါး ဖမ်းနည်းပပျောက်လျော့နည်းသွား ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အဆိပ်ချ ခြင်းဖြင့် အဆိပ်မိ ငါးများ သည် အုပ်စုအလိုက် နေထိုင်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ခြင်း၊ ဆောက်တည်ရာမဲ့ ဦးခေါင်းအောက်စိုက်၍ ဆန်ကောဝိုင်းကဲ့သို့ လည်နေ တတ်ခြင်း၊ ရှင်သန်ရပ် တည်နိုင်စွမ်း နည်းပါး၍ အချိန်တို အတွင်း သေဆုံးတတ်ခြင်း၊ မိနစ်ပိုင်းမျှ ဖြင့် ပုပ်သိုး ဆွေးမြေ့လွယ်ခြင်း၊ ၎င်းင်း ဝန်းကျင်တွင် ရေပျော်ငှက်တို့ ဝဲပျံနေတတ်ခြင်း၊ စားသုံးပါက ငှက်များပင် သေကြေတတ် ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိရာ ယခုငါးဇင်ရိုင်း များ ရင်ဆိုင်ရသည့် အဟန့်အတားနှင့် ကွဲလွဲလျက်ရှိ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပုဇွန်တောင်ချောင်းတွင် ငါးဇင် ရိုင်း အုပ်စုများ ရေပေါ်ဆန်တက်နေ ခြင်းသည် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ၃မျိုး အနက် ရာသီနှင့်ကိုက်ညီသော ရွှေ့ ပြောင်းခြင်း ကို ဆောင်ရွက်ရင်း၊ ရာသီဥတု ပြောင်း လဲလာမှု သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင်ရေထု ညစ်ညမ်းမှု၊အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တောက် မှုများကြောင့် အရင်းခံဖြစ်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ရေထုညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် ရေနေသတ္တဝါများ အတွက် အသက်ရှင်သန်ရေး အားထား ရာ ရေတွင်ပျော်ဝင်သည့် အောက်ဆီ ဂျင် ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရေး၊ မြို့ပြ နေပြည်သူများမှ စနစ်တကျ အမှိုက်စွန့် ပစ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ ပုပ်သိုးလွယ်စွန့်ပယ်ပစ္စည်း များ၊ ပလတ်စတစ်၊ ဖော့ပုံးကဲ့သို့သော အထောက်အကူပစ္စည်းများ ကမ်းတွင်း နှင့် ရေတွင် စွန့်ပစ်ခြင်း၊ လောင်စာဆီ သုံးရေယာဉ်များနှင့် ဓါတ်ငွေ့သုံးစက်ရုံ များမှ ဖိတ်စင်ယိုကျမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်းများ ကို တာဝန်သိသော၊ တာဝန်ယူတတ် သော အသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်း ရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့် ရေပျော်ငါးကလေး များ၏ ကမ္ဘာ ကို စာနာ စိတ်ထား ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် သင့်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံတိုင်းက စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ ရေးကို ဦးစားပေးကြစမြဲပါ။ မိမိတို့နိုင်ငံ မှာလည်း ဆန်ဖူလုံရေး၊ ဆီဖူလုံရေးကို အစိုးရ အဆက်ဆက်က ဇောက်ချလုပ် ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့အထိ ကိုယ့်နိုင်ငံက လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုပဲ အခြေပြုနေရ သေးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တော့ ပြည်ပပို့ကုန် အမယ်တွေကို ကြည့်ရင် ဆန်၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်းစတဲ့ လယ်ယာထွက်ကုန် တွေကိုပဲ အဓိကတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလယ်ယာထွက်ကုန်တွေထဲမှာမှ ဆန်ဆိုရင်လည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ အဓိက အခြေခံစားသောက်ကုန် ဖြစ်တဲ့အတွက် နှစ်စဉ်ထွက်ရှိမှု၊ စားသုံးမှု၊ ပိုလျှံမှုတွေကို သေချာစွာ တွက်ချက်ပြီးမှ ပြည်ပတင်ပို့ သင့်တဲ့ပမာဏကို ခွင့်ပြုပေးနေသလို၊ နှမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း နှမ်းနက်နဲ့နှမ်း ဖြူကိုသာ ပြည်ပကိုတင်ပို့ခွင့်ပြုပြီး၊ ဆီကြိတ်နှမ်းဖြစ်တဲ့ နှမ်းနီနဲ့နှမ်းညိုကိုတော့ ပြည်တွင်းဆီဖူလုံဖို့နဲ့ ဆီစက်လုပ်ငန်းရှင် တွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှိဖို့ ပြည်ပကို တင်ပို့ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ မြေပဲ ကိုလည်း နှမ်းနီ၊ နှမ်းညိုလိုပဲ ခွင့်မပြုခဲ့ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း နှမ်းနီ၊ နှမ်းညိုသာမက မြေပဲလုံးဆန်တွေကို ပြည်ပက ဝယ်လိုအားကလည်း ရှိနေတော့ တရားမဝင်လမ်းကြောင်းက ခိုးထွက်နေခဲ့တာဆိုတော့ နိုင်ငံတော် အတွက်အခွန်အခ အပါအဝင် အဖက် ဖက်က ဆုံးရှုံးမှုတွေပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလကစပြီး ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ စားအုန်းဆီကို လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် တစ်ပိဿာ ၂၅၀၀ ကျပ်ဝန်း ကျင်က မဆင်းတဲ့ စားအုန်းဆီဟာ တစ်ပိဿာ ၂၀၀၀ ကျပ် အောက်ကို ဆင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်။ တင်သွင်းတဲ့ စားအုန်းဆီကိုလည်း Cloud Point (CP) ၁၀ မှတ်ကနေ ၈ မှတ်ထိ အဆင့် မြှင့်ပြီး သွင်းဖို့ နဲ့ Iodine Value (IV) ကိုလည်း 58 min နဲ့ သွင်းဖို့ စီစဉ် ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ တွေအနေနဲ့ ပြည် တွင်းမှာ အဆင့်မြင့် စားအုန်းဆီတွေကို သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ဝယ်ယူ စားသုံးခွင့်ရလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီအခြေအနေ မှာ အရင်က ပြည်ပကို တင်ပို့ခွင့် ကန့်သတ်ထားတဲ့ နှမ်းနီ၊ နှမ်းညို၊ မြေပဲလုံး ဆန်တွေကိုစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အမိန့်အမှတ် ၁/၂၀၁၁ နဲ့ ပြည်ပတင်ပို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပမှာ ဈေးကွက် ရှိပြီး၊ ဝယ်လိုအားလည်းရှိနေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်လို့ တင်ပို့ခွင့်ပြုတဲ့ အတွက်ဝယ်လိုအားရဲ့တွန်းအားကြောင့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်လာစေဖို့ ရည်ရွယ်သလို အဓိက ဈေးကွက်ကြီး တစ်ခုကိုပဲ မှီခိုနေရတဲ့ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံ စိုက်ပျိုးနေတဲ့ တောင်သူတွေ အနေနဲ့လည်း ဒီနှစ် ဈေးကောင်းလိုက် နောင်နှစ်ဈေးမကောင်းလိုက်နဲ့ သံသရာ လည်နေတဲ့ ဘဝကနေ ကိုယ့်လယ်ယာမြေမှာ ပြည်ပဈေးကွက် ပုံမှန်ရှိတဲ့ သီးနှံ တွေ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုး နိုင်စေဖို့လည်း အခွင့်အလမ်းတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ နှမ်းနီ၊ နှမ်းညိုနဲ့ မြေပဲဆန်တွေကို ပြည်ပကို ဒီအတိုင်း တင်ပို့တာထက် တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်အဖြစ် နှမ်းဆီ၊ ပဲဆီကြိတ်ပြီးတင်ပို့ဖို့ နိုင်ငံတော်က ပိုပြီးလိုလားပါ တယ်။ ဒါမှလည်း ပြည်တွင်းက ဆီစက် တွေလည်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မလျော့သလို ထွက်လာတဲ့ ပဲဖတ်၊ နှမ်း ဖတ်ကလည်း ပြည်တွင်းမွေးမြူရေး လုပ် ငန်းမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်က ဖြစ်စေချင်တဲ့ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ ထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်ပတင်ပို့ဖို့ အတွက် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဘယ် လို ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်၊ ဘယ်လောက်အဆင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကို ကောမတ်စ်အဖွဲ့က လေ့လာ ဆွေးနွေး ခဲ့တာကို ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တွေရရှိဖို့လို ပဲဆီကို နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့နိုင်ရန် တောင်သူများအနေနဲ့ မြေပဲမျိုးကောင်း မျိုးသန့်များကိုသာ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရန် လိုအပ်လှသလို အဆိုပါ မျိုးကောင်းမျိုး သန့်များကို ရရှိရန်မှာလည်း နိုင်ငံတော် အပိုင်းမှ ပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်လှကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ဧရာဝတီမြေပဲဆီစက်ပိုင်ရှင် ဦးခင်စိုးက "တကယ်လို့ ပြည်ပကိုတင်ပို့တော့ မယ်ဆိုရင် ဒီမှာစိုက်တဲ့မျိုးက ကောင်းဖို့ တော့လိုတယ်။ ဥပမာ တရုတ်နိုင်ငံဆန်း တုန်းပြည်နယ်ကထွက်တဲ့မြေပဲဆိုရင် တစ်ဧကကို တင်း၁၀၀ကျော်လောက် ထွက်တယ်။ အဲဒီမျိုးကတော့အကောင်း ဆုံးပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုနဲ့ကိုက် ညီမှုရှိမရှိမသိရပေမယ့် အဲဒီလိုမျိုးကို စိုက်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံး ပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုအဲဒီဒေသမှာလည်း ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်နေလို့ ပဲဆီကို လိုအပ်နေတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ် နေတယ်"လို့ မြေပဲမျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိရေးအတွက် အကြံပြု ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။ ငွေသဇင်မင်း ဆီစက်လုပ်ငန်းမှ ဦးအောင်ရွှေကလည်း "ပြည်ပကိုတင်ပို့ ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တွေ စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ မျိုးကောင်းမျိုး သန့်တွေ ရတဲ့အတွက် ဆီထွက်နှုန်းပို လာနိုင်တဲ့အတွက် ပြည်ပတင်ပို့ရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ။ ဒါပြင့် မြေ ကြီးမှာဥတဲ့ပဲက ပဲသားကျစ်တဲ့အတွက် ဆီပိုထွက်ပါတယ်။ သဲသောင်မှာစိုက်တဲ့ ပဲက ပဲသားပွတဲ့အတွက်ဆီအထွက်နှုန်း နည်းတယ်။ ပဲကို စနစ်တကျသိုလှောင် မယ်၊ အခြောက်ခံမယ်။သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထားမယ်ဆိုရင် မှိုတက်တာတို့ ဆီညံ့ တာတို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး"လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ခေတ်မီနည်းစနစ်တွေအသုံးပြုဖို့လို ပဲဆီကို အထွက်နှုန်းတိုးစေဖို့ အတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်တွေရရှိရေး ဟာ အရေးပါသလို ခေတ်မီ နည်းစနစ် များနဲ့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုရေးဟာလည်း အရေးပါလှတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ရပ် မှာပါဝင်နေကြောင်း ဧရာ ဝတီပဲဆီလုပ်ငန်းမှ ဦးခင်စိုးက ထောက် ပြခဲ့ပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိလည် ပတ်နေတဲ့စက်တွေနဲ့ထုတ်လုပ်ဖို့က မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ စက်တွေနဲ့ကြိတ်ခွဲတဲ့အခါကျတော့ အလေအလွင့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ များတယ်။ မမြင်ရတဲ့လေလွင့်မှု တွေပေါ့။ သူတို့ဆီ က ခေတ်မီစက်တွေနဲ့ကြိတ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီစက်တွေက တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့လည် တဲ့အတွက် အပူပမာဏ မဆုံးရှုံးဘူး။ မြေပဲဆီရဲ့သဘာဝက ပူနေတဲ့အချိန်မှာ ကြိတ်တဲ့အတွက်ဆီထွက်အားပိုကောင်း တယ်။အေးသွားရင်ဆီကလိုသလောက် မထွက်တော့ဘူး။ မြေပဲဆန် အချိန်၁၀၀ ကို သူတို့ဆီက စက်နဲ့ကြိတ်လို့ဆီအချိန် ၄၀ထွက်ရင် ဒီကစက်နဲ့ကြိတ်ရင် အချိန် ၃၇လောက်ပဲထွက်တယ်။ မြေပဲဖတ်ဆို ရင်လည်း မြေပဲဖတ် အချိန် ၁၀၀ကို ဆီပမာဏ ၇/ ၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါသွားတဲ့အချိန်မှာ သူတို့စက်ကထွက်တဲ့ မြေပဲဖတ်က ဆီပမာဏ ၁ရာခိုင်နှုန်း လောက်ပဲပါတော့တယ်။ ဆီပါဝင်မှု ပမာဏနည်းလေ ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှုပမာဏ များလေဆိုတော့ သူတို့ဆီက မြေပဲဖတ်က တိရစ္ဆာန်တွေအတွက် ပိုပြီးကောင်းနေတယ်။ ဒီကဆီစက်တွေ က မွေးမြူရေးသမားတွေအတွက်လည်း ပရိုတင်းဆုံးရှုံးရသလို တစ်ဖက်မှာလည်း ဆီဈေးက လိုအပ်တာထက်ပိုမြင့်လာ တာပေါ့။ ဒါဟာ လည်ပတ်တဲ့စက်ရဲ့ အားသာချက်ကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးတရားတွေပါ"လို့ ပြည်တွင်းဆီ စက်များနဲ့ ပြည်ပက ခေတ်မီဆီစက်များ ရဲ့အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်ပြောပြခဲ့တာပါ။ တရုတ်ကိုသွားမယ့် ဧရာဝတီ ဧရာဝတီမြေပဲဆီကို တရုတ်နိုင်ငံ ကိုပို့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း သိရပါ တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်မှာ ဧရာဝတီမြေပဲဆီဟာ ဈေးကွက်ဝင်ပြီး သားဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။ "ကျွန်တော့်ရဲ့ဧရာဝတီမြေပဲဆီကို ယူနန်ကိုပို့ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ အဲဒီမှာ တော့ ယန်ကျန်းဆိုတဲ့ တံဆိပ်နဲ့ရောင်း နေတာပါ။ ယန်ကျန်းဆိုတာ သူတို့ဆီ ကအခေါ်ပေါ့။ ဧရာဝတီလို့ အမည်ရပါ တယ်။ ကျွန်တော့်မြေပဲဆီကို ကုန်စည်ပြပွဲမှာ တရုတ်တွေ ဝယ်သွားတာရှိ တယ်။ သူတို့ဆီမှာ သုံးတဲ့ဆီက ဒီက ဆီလောက်မကောင်းဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဆီက မြေပဲဆီက Quality ကောင်းပြီး သား။ ဒါပေမယ့် ပို့မယ်ဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံ ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သိထားဖို့ တော့လိုမယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဆိုရင် သူတို့ ဆီမှာ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြတ်တိုင်း အခွန် ဆောင်နေရတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဆီ က တံဆိပ်နဲ့ကပ်ပြီးရောင်းမှအဆင်ပြေ တာ။ ပြည်ပကသွင်းကုန်ဆိုရင် ပြည် နယ်တစ်ခုဖြတ်တိုင်းအခွန်ဆောင်နေရ တာ"လို့ ဧရာဝတီမြေပဲဆီကို ယူနန်ကို ရောင်းချမယ့်ပုံစံကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ နှမ်းဆီကိုလည်း ပို့မည် ဧရာဝတီမြေပဲဆီလုပ်ငန်းဟာ နှမ်းဆီကိုလည်း ပြည်ပကိုပို့ဖို့ စီစဉ်နေတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ နှမ်းဆီကို ပို့နိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့နှမ်းဆီကို ပြည်ပ နိုင်ငံတွေက လက်ခံထားပြီးသားပါ။ အရင်တုန်းကတည်းက နှမ်းဆီကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက စား မှ မစားကြတာ။ အဲဒီတော့ ပိုလျှံနေ တာ။ နှမ်းဆီကိုတော့ ပို့ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်"လို့ ဧရာဝတီဆီစက်ပိုင်ရှင် ဦးခင် စိုးက ပြောခဲ့တာပါ။ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ မြေပဲဆီတွေ နှမ်းဆီတွေကို ပြည်ပ ကိုတင်ပို့ခွင့်ရချင်ပါတယ်ဆိုပေမယ့် လည်း နိုင်ငံတော်က တမုဟုတ်ချင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူ ပြည်ပကို တင်ပို့ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ မြေပဲဆီတွေ နှမ်းဆီတွေကို ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ဟာ အခက်အခဲများ နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးကြောင်း သိရပါတယ်။ "ကျွန်မတို့ အနေနဲ့က ဒီနှစ်မှာ တော့ ပြည်ပကို ပို့ဖို့အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆို တော့ ဒီနှစ်မှာက သိတဲ့အတိုင်း မိုးက လည်းများရေတွေကလည်းကြီးဆိုတော့ ကုန်ကြမ်းရဖို့ အခက်အခဲရှိသလို ကုန် ကြမ်းတွေကို ဝယ်ပြီးလှောင်ဖို့ကလည်း အခက်အခဲတွေရှိတယ်။ နှမ်းကကိစ္စမရှိ ပေမယ့် မြေပဲကတော့ စိုရင် မှိုတက် တာတွေ ဘာတွေနဲ့ ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ နောက်နှစ်မှာ ဆိုရင်တော့ ပို့နိုင်မှာပါ။ ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ တရုတ်နဲ့စင်ကာပူကို ပို့မှာပါ"လို့ ငွေသဇင်မင်းဆီစက်ပိုင်ရှင် ွှက ပြောခဲ့တာပါ။ မကွေးမြို့ရှိအမေထွားဆီစက်ပိုင်ရှင် ဦးဋ္ဌေးအောင် ကလည်း "ကျွန်တော်တို့ ဆီစက်အနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာတော့ ပြည်ပကိုပို့ဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ လာမယ့် နှစ်မှာဆိုရင်တော့ စက်အသစ်ဆင်ဖို့ လည်းရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်ကျမှပဲ ဝယ်လက်ကို ရှာရမှာ။ ကုန်ကြမ်းကတော့ ဆောင်းမြေပဲကိုပဲ အဓိကထားပြီးဝယ် ရမှာဆိုတော့ အဲဒီအချိန်ကျမှပဲ ပြည်ပပို့မယ်အစီအစဉ်ကို စတော့မယ်"ဟု ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားနဲ့ မန္တလေးရှားသွားမယ့် ဇွဲ မြန်မာ့နှမ်းဆီကို နိုင်ငံတကာဈေး ကွက်မှာ ထိုးဖောက်နိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတာကို သိရှိရပါတယ်။ မြန်မာ့နှမ်းဆီမှာ ဖယောင်းပါဝင်မှုများတဲ့အ တွက် အဲဒီဖယောင်းကို လျှော့ချသန့်စင် ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံများကို ပို့နိုင်အောင်စီစဉ် လျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဇွဲနှမ်းဦးရည်ဆီသန့်မှဦးတင်အောင်ကျော်က "ကျွန်တော်ကတော့ဒီဇွဲအမှတ် တံဆိပ်နဲ့ ပြည်ပကို ပို့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ ကိုရီးယားနဲ့မလေးရှားက ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ သူတို့ဖက်က ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံးလုပ်ထား တာကို လက်ခံနိုင်မလား၊ သူတို့ဖက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော် တို့က လုပ်နိုင်မလား အဲဒါတွေကို သေ သေချာချာညှိနှိုင်းပြီးမှပဲ ပြောနိုင်မှာပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့နှမ်းဆီ ကို ကိုရီးယားနဲ့မလေးရှားကတော့ ကြိုက်တယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာ့ ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီတွေ ပြည်ပ ဈေးကွက်ကို ပုံမှန်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ရေး ကို ကြိုးပမ်းကြရာမှာ အထက်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့သလို အထွက်ကောင်းတဲ့ မျိုးတွေ၊ ခေတ်မီ စိုက်ပျိုး၊ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်း နည်းတွေ၊ ဆီကြိတ်တဲ့ခေတ်မီ နည်း ပညာနဲ့ ဆီစက်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ တောင်သူစိုက်ပျိုးထွက်ရှိလာတဲ့ ပဲတွေ၊ နှမ်းတွေကိုပဲ ထိုင်စောင့်ပြီး ဆီကြိတ်ပို့ ဖို့ဆိုတာထက် စိုက်ပျိုးချိန်ကနေ သိုလှောင်၊ ကြိတ်ခွဲ၊ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့် ဆင့်မှာ စနစ်တကျ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆောင်ရွက်မှသာ မြန်မာ့ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီတွေ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာ ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ် ကြောင်းပါ ခင်ဗျား။..
အာဆီယံ-ဂျပန်စင်တာရဲ့ ကုန်စည် ပြပွဲကိစ္စနဲ့ ဒီနှစ်စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်း မှာ မောင်ပန်းသီး ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုနဲ့ အိုဆာကာကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ ရက် နေ့က ဂျပန်မှာ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ဆူနာမီရေလှိုင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတစ်ဟုန်ထိုးစီး နေတဲ့ ရေလှိုင်းများနဲ့အတူ ကားငယ်လေးတွေ အများအပြား မျောပါခဲ့တာ ကို ရုပ်မြင်သံကြားမှာ Live Show တာကို ကြည့်နေရင်း စိတ်မ ကောင်း ဖြစ်မိသလို ကားငယ်လေးတွေ ဂျပန် မှာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်များများ အသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စား မေးခွန်းထုတ်မိခဲ့ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းအဖြေရဖို့ ဂျပန်ရောက် တုန်းနီးစပ်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို စုံစမ်း မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ကားငယ်လေး တွေကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အသုံးပြုနေတဲ့ အာဆီယံ-ဂျပန်စင်တာ ကဝန်ထမ်း Mr.Go Matsuura ကို စပ်စုကြည့်တဲ့ အခါ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ၁၀၀၀ စီစီနဲ့ အောက် အလေးချိန် ၃၅၀ ကီလိုဂရမ် ထက်မများသောယာဉ်ငယ်လေးများကို အဝါရောင်နံပါတ်သတ်မှတ်ပြီး K ကားလို့ ခေါ်ကြောင်း၊ သူစီးတဲ့ K ကားငယ် ဟာ ၆၆၀ စီစီအင်ဂျင်ပါဝါရှိပြီး လူ ၄ ယောက်စီးနင်းနိုင်ပြီး အမြန်နှုန်းမှာ တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၄၀ အထိ မောင်းနိုင် ကြောင်း၊ အလုပ်သွားခြင်း၊ မိသားစုနှင့် အပန်းဖြေထွက်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်းစတဲ့ ကိစ္စအားလုံးအတွက် သုံးနိုင်ပြီး ဆီစားနှုန်းကလည်း အဲယားကွန်း အသုံးပြု လျက်ဓာတ်ဆီတစ်လီတာကိုကီလိုမီတာ ၂၀ သုံးနိုင်တာမို့ တစ်ဂါလန်ကို ကီလို မီတာ ၈၀ (မိုင် ၅၀) အထိရကြောင်း၊ မြို့တွင်းမှာ ကားရပ်ရင်လည်း အလွယ် တကူရပ် နိုင်တဲ့အတွက် သူ့ဇနီးမှာ လည်း အလုပ်သွားဖို့ K ကားငယ် တစ်စီးသီးခြားရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။ K ကားလေးတွေရဲ့အားသာချက် တွေကို သူကဆက်ရှင်းပြရာမှာ ဂျပန် လူမျိုးတွေအနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို အ လေးထားတဲ့ အပြင် လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်ကစပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မှု နှေးကွေးလာမှု ကြောင့် ခြိုးခြံချွေတာရေးကိုလည်း အထူးဦးစားပေးလာကြကြောင်း၊ တိုကျို လူဦးရေ ၃၆ သန်းကျော်ဟာ အလုပ် သွားအလုပ်ပြန်မှာ ရထားကို အားထား အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး မြေအောက်ရထားအ ပါအဝင် တိုကျိုမြို့မှာ ရထားလိုင်း ၆၀ ကျော်နေ့ညပြေးဆွဲနေကြောင်း သိရ ပါတယ်။ (စင်ကာပူမှာ ရထားလိုင်း ၄ လိုင်းသာ ပြေးဆွဲပါတယ်။) တိုကျိုမြို့ကဲ့သို့ မြို့ကြီးများမှာ ကားတစ်စီး ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကားဝယ်မယ့်သူရဲ့ နေအိမ်/အ ခန်းနှင့် တစ်ကီလိုမီတာအကွာအတွင်း ကားရပ်နားရန် နေရာရှိကြောင်းကို ဒေသခံ ရဲစခန်း ထောက်ခံချက်ပါမှသာ ကား ဝယ်ယူခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် K ကားငယ်လေးများကို ဝယ်စီးမည်ဆိုပါ က ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မလိုဘဲ ဝယ်စီးခွင့်ရှိကြောင်း၊ ကားရပ်နားနေရာ ငှား ရမ်းခမှာလည်း ဒေသအလိုက်ကားတစ် စီးကို တစ်လ ဒေါ်လာ ၄၀၀ မှ ၆၀၀ အထိပေးရကြောင်း၊ နံပါတ်ဝါတပ် K ကားငယ်လေးများကိုတော့ နေရာကျဉ်း ပြီးဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်တဲ့အ တွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ခန့်ဖြင့်ငှားနိုင် ကြောင်း၊ ဂျပန်အစိုးရက ကားများကို အခွန် ကောက်ခံရာမှာ အင်ဂျင်ပါဝါ စီစီနဲ့ သတ်မှတ်ကောက်ခံပြီး ၁၀၀၀ စီ စီအောက် K ကားငယ်လေးတွေသုံးတာ ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ အထူးသက်သာ တဲ့နှုန်းနဲ့ ကောက်ခံပေးကြောင်း၊ အင် ဂျင်ပါဝါကြီးလေလေ အခွန်များများ ကောက်ခံလေဖြစ်လို့ အခွန်စနစ်နဲ့ K ကားလေးတွေကို ပိုစီးလာအောင်ဆွဲ ဆောင်မှုပေးထားတာကြောင့် ယနေ့ ဂျပန်မြို့နေအခြေခံလူတန်းစားနဲ့ လူ လတ်တန်းစားများဟာ K ကားလေး တွေကို ပိုပြီးဝယ်ယူအသုံးပြုလာကြ ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ ကိုရွှေဂျပန်က K ကားလေးတွေ ကို ကောင်းခြင်းငါးဖြာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ ဆက်ညွှန်းပါသေးတယ်။ပထမအချက်က ကားရပ်နားတဲ့နေရာ ငှားရမ်းခသက် သာခြင်းနဲ့ဝယ်တဲ့အခါရဲစခန်းထောက် ခံချက်မလိုခြင်း၊ ဒုတိယ အချက်က ဘီး ခွန်အပါအဝင် အခွန်အခများသက် သာခြင်း၊ တတိယအချက်က ကားအရွယ်ငယ်သဖြင့် ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု သက်သာခြင်း၊ စတုတ္ထအချက် က ဆီစားနှုန်း သက်သာခြင်း(ဂျပန်မှာ ဓာတ်ဆီတစ်ဂါလန် ကျပ် ၆၀၀၀ ခန့်) ပဉ္စမအချက်က ဆီအသုံးပြုမှုနည်းပြီး မီးခိုးထွက်တာအလွန်နည်းတဲ့အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသက် သာစေခြင်းတို့ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် နည်းပြီး စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို အထောက်အကူပြုခြင်းစတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် တွေနဲ့ ပြည့်စုံကြောင်း ချီးမွမ်းခန်းဖွင့် သွားပါတယ်။ သူစီးနေတဲ့ ၂၀၀၂ မော်ဒယ် K ကားကို အခုဝယ်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက် သာရှိကြောင်း၊ ၂၀၀၀ မော်ဒယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ (မြန်မာကျပ် ၁၂ ဒသမ ၅ သိန်း) လောက်ပဲရှိတယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။ သူပြောတာကြားရတော့ မောင် ပန်းသီးတို့ငယ်ငယ် ၁၉၆၅/၆၆ ခုနှစ် လောက်က မာဇဒါ ဘီ ၃၆၀ လေးဘီး ကားလေး အဖေ ဝယ်ခွင့် မဲပေါက်လို့ စီးခဲ့ရတာကို အမှတ်ရမိနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က အဖေက လခ ကျပ် ၁၂၀၀ ရတဲ့ခရိုင်အဆင့် အရာ ထမ်း တစ်ဦးပါ။ မာဇဒါကားလေးကို ကျပ် ၁၈၀၀၀ နဲ့ ဝယ်ခွင့်ရတော့ တန်ဖိုး တစ်ဝက်ငွေသွင်းပြီး ကျန်တစ်ဝက်ကို လခမှ အရစ်ကျလပေး (Installment) စနစ်နဲ့ အစိုးရကစီစဉ်ရောင်းပေးတာကို မှတ်မိပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က အဖေ့ လစာနဲ့ ဆိုရင် ၁၅ ဆလောက်ရှိတဲ့ ဂျပန် ကားလေးကို မိသားစုနဲ့ စီးခဲ့ရတာကို အမှတ်ရနေပါတယ်။ အခုလည်းအဖေတို့ ခေတ်ကလို ဂျပန် K ကားသေးလေး တစ်စီးလောက် ဝယ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ စီးရင်ဘယ် လောက် ကုန်ကျမလဲလို့ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ မြန်မာမိတ်ဆွေတွေကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ယခုကား ဟောင်းအပ်ပြီး ၁၉၉၅ မော်ဒယ်အထက် ဝယ်သွင်းခွင့်ရ ချိန်မှာ မြန်မာတွေ ကြိုက်တဲ့အင်ဂျင် ပါဝါများတဲ့ မတ်တူး ရွှေငါး၊ ဆာ့ဖ် စတဲ့ ကားတွေအလုအယက်မှာကြပြီး လေလံ အပြိုင်ဆွဲကြလို့ ဂျပန်လေလံဈေးကွက် မှာ အမြင့်ကားတွေ ဈေးသုံးလေးဆ တက်သွားပေမဲ့ အခြားဆလွန်းကား၊ ဗင်ကား၊ K ကားငယ်လေးတွေ အပါ အဝင် ကားအများစုဟာ မူလအတိုင်း ဈေး သက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်လို့ရပါ တယ်တဲ့။ နမူနာအနေနဲ့ အင်ဂျင် ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီရှိတဲ့ ၂၀၀၀ မော်ဒယ် တိုယိုတာမတ်တူးကို ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၊ အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၀၀၀ စီစီရှိတဲ့ ၁၉၉၈ မော်ဒယ် ကယ်ဒီးနား ဗင်တစ်စီးကို ဒေါ်လာ ၂၄၀၀၊ ၁၅၀၀ စီစီရှိတဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ နစ်ဆန်းဆန်နီဆလွန်းတစ်စီးကို ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ သာရှိကြောင်း သိရပါ တယ်။ ကားတွေကို ကွန်တိန်နာနဲ့ ထည့်ပို့ရင် အထိအခိုက်သက်သာပြီး ဆိပ်ကမ်း မှာပစ္စည်းအပျောက်အရှ နည်းတာမို့ ကွန်တိန်နာကို အများဆုံးအသုံးပြုကြကြောင်း၊ ဂျပန်က ရန်ကုန်အရောက် ကွန်တိန်နာတစ်လုံး ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ လောက်ရှိပြီး K ကားလေးဆိုရင် ၅ စီး ဆံ့တာမို့ တစ်စီးဒေါ်လာ ၈၀၀ လောက် ပဲကျမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် K ကားလေးတစ်စီးကို ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း အရောက်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀(ကျပ်သိန်း ၂၀)လောက်သာ ရှိပါ မယ်။ ဆိပ်ကမ်းမှာ ပေးရမဲ့ CIF ဈေးပေါ်မှာ အကောက်ခွန်နဲ့ ကုန်သွယ်ခွန် နှစ်ရပ်ပေါင်း အခွန် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း (ကျပ်၁၃ ဒသမ၅ သိန်း)နဲ့ ကညန လိုင်စင် လုပ်ရာမှာ ပေးရမဲ့ FOB ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း (ကျပ် ၁၂ ဒသမ ၅ သိန်း) စုစုပေါင်းကျပ် ၂၆ သိန်းလောက် ကုန်ကျမှာမို့ စုစုပေါင်း ကျပ် ၄၆ သိန်း လောက်နဲ့ဆိုရင် နံပါတ် ထွက်ပြီး ဂျပန် ကားတစ်စီးစီး နိုင်မယ်လို့ စိတ်ကူးကြည့် မိပါတယ်။ ဂျပန်မှာလို အင်ဂျင်ပါဝါနည်း ပြီး ဆီစားသက်သာတဲ့ ၁၀၀၀ စီစီ အောက်ကားလေးတွေကို သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုကို အားပေး တဲ့အနေနဲ့ ဇိမ်ခံကား၊ အမြင့်ကားတွေနဲ့ မတူအထူး အခွန်လျော့ပေးမှုမျိုး ဒီမှာ ရှိမယ်ဆိုရင် ပိုမိုသက်သာ သွားမှာပါ။ လူကြိုက်များတဲ့ ဇိမ်ခံကား၊ အမြင့် ကားတွေကို လုဝယ်ကြလို့ တစ်စီးကို ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ကျော်လောက်ရှိနေ တဲ့အချိန် မှာ K ကားလေးတစ်စီးဟာ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ နဲ့ ၂၀၀၀ ကြားသာရှိပါတယ်။ သွင်းကုန်တန်ဖိုးနဲ့ တွက်ရင် ဒေါ်လာတစ်သန်းမှာဇိမ်ခံကား၊ အမြင့် ကား၆၀/၇၀စီးလောက်သာ သွင်းနိုင်ပြီး K ကားလေးတွေ သွင်းမယ်ဆိုရင် အစီး ၆၀၀/ ၇၀၀ လောက်သွင်းနိုင်တာ ကြောင့် ကားစီးနိုင်တဲ့လူဦးရေ ၁၀ ဆလောက် တိုးပွားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေ ညီညီညွှတ်ညွှတ် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ စနစ်တကျ ဝယ် တတ်ဖို့တော့လိုပါမယ်။ မတ်တူး၊ ရွှေငါး၊ ဆာ့ဖ်ကားတွေလို အလုအယက် အပြိုင် အဆိုင်လုပ်ကြမယ် ဆိုရင်တော့ ဂျပန် တွေကို လုပ်ကျွေးနေသလို ဖြစ်သွား နိုင်တာကိုလည်း သတိချပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မောင်ပန်းသီးလစာရဲ့ အဆ ၂၀ ကျော်နဲ့ အဖေတို့ခေတ်ကလို ဂျပန် လုပ်ကားလေးတစ်စီးဝယ်စီးနိုင်မယ်လို့ အတွေးနဲ့ ကြည်နူးနေမိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ လိုဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံကြီးမှာ ပင် အစိုးရနဲ့ ပြည်သူသဘောညီစွာနဲ့ သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ လောင်စာဆီ ချွေတာရေးနဲ့ စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်မှုတွေကို ဦးစားပေးပြီး Small is Beautiful ဆိုတဲ့စကားလို K ကားလေးတွေ ကိုပိုမိုသုံးစွဲအောင် စီစဉ်ခြင်းဟာ အတုယူထိုက်တဲ့ စံနမူနာ ကောင်းတစ်ခုလို့ မှတ်ယူမိပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ။ K ဆိုတာ ဂျပန်လို Kei ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး ပေါ့ပါးခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။)
အိုမင်းဟောင်းနွမ်းသော ပုဂ္ဂလိကပိုင် မော်တော်ကားများအစားထိုးလဲလှယ်ရေး အစီအစဉ်အရ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် အထူးပါမစ်ထုတ်ပေးမှုနဲ့ စပ်လျဉ်း၍ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့များနှင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက် ၁၀း၀၀ နာရီအချိန်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ နေပြည်တော်ဖက်မှ ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးခင်မောင်လေး၊ ဝန်ကြီးရုံး ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးတိုးအောင်မြင့်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကိုကိုမင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန် မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းအောင်၊ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန မူဝါဒဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်စိုးလင်းတို့ တက်ရောက်ကြပြီး မီဒီယာပိုင်းမှ Skynet up to date channel မှ Producer ဦးရွှေဦးနှင့်Presenter ဒေါ် ကြည်ပြာအောင်၊ ရန်ကုန်ဖက်မှ တက်ရောက်ကြသူများမှာ ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းအောင်ကျော်၊ မြန်မာ့လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ်ရေးမှ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ The Voice Weekly, Weekly Eleven, Venus,7Day, ကုမုဒြာ၊ မော်ဒန်၊ ပြည်မြန်မာဂျာနယ်တို့မှ အယ်ဒီတာများ၊ သတင်းထောက်ချုပ်များ၊ သတင်းထောက်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သတင်းဌာနများရဲ့ ဆွေးနွေးချက်များအပေါ် တာဝန်ရှိသူများမှ ဖြေကြားချက်များကို ကောမတ်စ်ပရိသတ်များအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် အထူးပါမစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမေးမြန်းချက်များ ကားဟောင်းအပ်တဲ့ စလစ်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ကားအပ်ဖို့ ၃လခွင့်ပြု ထား ပါတယ်။ ကား မဝယ်နိုင်သေးခင် ဘယ်ကာလအထိ ကိုင်ထားခွင့်ရှိပါသလဲ။ နောက်ထပ်ငွေ ဘယ်လောက်လိုက်ရမယ်ဆိုတာကို မခန့်မှန်းနိုင်သေး တဲ့အတွက် စလစ်ကို ထိုးအပ်လိုက်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဥပမာ-လေးဘီးကားဟောင်း တစ်စီးအပ်လျှင် ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ တန် ကား တစ်စီးအတွက် နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲဆိုတာ နမူနာတွက်ချက်ပေး စေချင် ပါတယ်။ ကားအပ်ချိန်မှာ ပါမစ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အင်ဂျင်နံပါတ်၊ Chassis နံပါတ်၊ Frame နံပါတ်၊ Model Year များ၊ သင်္ဘော တင် ဆိပ်ကမ်း ကွဲလွဲမှုစတဲ့ ပြသနာများ ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသလဲ။ ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ပို့ကုန် သွင်းကုန် မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာစိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးဌာန ကားဟောင်းအပ် စလစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ယခုတွေ့ဆုံပွဲမှာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ မပါတဲ့အတွက် OSS အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ တစ်ဆင့် အဖြေကို ပြန်ကြား ပေးသွားပ့ါမယ်။ မိမိတို့ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသော သွင်းကုန် အထူးပါမစ်ကို သက်တမ်း ၃ လ ခွင့်ပြု ပေးထားပါတယ်။ ကားဟောင်းအပ်နှံပြီးနောက် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ သွင်းကုန် အထူးပါမစ်နဲ့ လျှောက်ထားတဲ့ ကားတန်ဖိုးပေါ်မူ တည်ပြီးပေးရပါမယ်။ သွင်းကုန်လိုင်စင် ကြေးများ ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုန်းထားများအတိုင်း ဆိပ် ကမ်းရောက် တန်ဖိုးအပေါ်တရားဝင် Exchange Rate နဲ့ တွက်ပြီး တန်ဖိုးအပေါ် မူတည်ပြီး ကျပ် ၁၀၀၀၀ ကို လိုင်စင်ကြေး ၂၅၀ ကျပ်၊ ကျပ် ၁၀၀၀၁ မှ ၂၅၀၀၀ ကျပ်ထိကို လိုင် စင်ကြေး ၆၂၅ ကျပ်၊ ကျပ် ၂၅၀၀၁ မှ ၅၀၀၀၀ ထိ ကို လိုင်စင်ကြေး ၁၂၅၀ ကျပ်၊ ကျပ် ၅၀၀၀၁ မှ ကျပ်တစ်သိန်းထိကို လိုင်စင်ကြေး ၂၅၀၀ ကျပ် နှုန်းနဲ့ ကျပ်၁၀၀၀၀၁ မှ ၂၀၀၀၀၀ ထိကို ၅၀၀၀ ကျပ် ကောက်ခံ လျက်ရှိပါတယ်။ Online စနစ်နဲ့ လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက Online ဆောင်ရွက်ခနဲ့ စာရွက်စာတမ်းကြေး အပါအဝင် နိုင်ငံတော် အတွက် ၄၀၀၀ ကျပ် ပေးသွင်းရပါမယ်။ စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ဒီစရိတ် တွေပဲရှိပါတယ်။ ကားဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိတဲ့ အခါ ဆိပ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုး အပေါ် အကောက် ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အကောက်ခွန်ပေး ဆောင်ရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အကောက်ခွန် ဌာနရဲ့ တွက်ချက်မှုအရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ ကုန်းလမ်းပို့ ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ မှတ်ပုံတင်ကြေးများပေးဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Invoice မှာပါတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေအတိုင်း စီးပွားရေးနဲ့ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အထူးသွင်းကုန်ပါမစ်မှာ ဖော်ပြပြီးခွင့်ပြုပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကညနမှာ ကားဟောင်းအပ်တဲ့ စလစ်မှာပါတဲ့ ကားဟောင်းပိုင်ဆိုင်သူ အမည်နဲ့ အထူး သွင်းကုန်ပါမစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Special Power လွှဲအပ်ခံရသူက လာရောက်လျှောက် ထားတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ မူဘောင်အတွင်းလွဲမှားမှုကို စိစစ်ပြီး ပြင်ဆင်ချက် ချက်ချင်းထုတ်ပေးပါတယ်။ လျှောက် ထားသူ ကားပိုင်ရှင်များအနေနဲ့ အခက်အခဲ မရှိ လောက်ပါဘူးလို့ ဖြေကြားလိုပါတယ်။ အထူးပါမစ်ရသွားပြီးမှ ပါမစ်မှာ ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းမကိုက်ညီလျှင် ဘယ်လိုအရေးယူပါသလဲ။ ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ခွင့်ပြုတဲ့အခါ ဘယ်အမျိုးအစား၊ ဘယ်မော်ဒယ်၊ ဘယ်နှစ်ထုတ်ဆိုတာ ဘောင်လေးတွေ ထုတ်ပြန် ကြေညာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Toyota Saloon ၁စီးဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ထိ Model အတွင်း ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားတွေတင်သွင်း ခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။ ပထမ အထူးပါမစ် လျှောက်ထားစဉ်က ၂၀၀၀ ခုနှစ်က Model ကိုဝယ်ယူရရှိ ထားပြီး ဖြစ်လို့၂၀၀၀ ခုနှစ်ထုတ်အနေနဲ့ Invoice တင်ပြပြီး အထူးပါမစ် လျှောက်ပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ထုတ် တိုယိုတာစလွန်းကား ၁ စီးလို့ အသေး စိတ် အချက်အလက်များ ဖော်ပြပြီး ပါမစ်ထုတ် ပေးထားပါတယ်။ ဥပမာ- ဆိပ်ကမ်းရောက်လာတဲ့ အခါ ၂၀၀၀ ခုနှစ်လို့ ပြောပေမယ့် နှစ်အပြောင်း အလဲ အရှုပ်အထွေးများ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်နဲ့ သွားချိတ်တတ်တာလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ထိ ခွင့်ပြုပေးထားတာမို့ ဒီလို ဘောင်အတွင်းက အမှားအယွင်းမျိုးကို စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အထူး ပါမစ်ဌာနကိုလာလျှောက်လျှင် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြု ပေးပါတယ်။ အောင်ဖြိုးမာန်၊ ကုမုဒြာဂျာနယ် ကားစီးရေဘယ်လောက်အတွက် ပါမစ် ထုတ်ပေးထားပြီးပါပြီလဲ။ ဦးကိုကိုမင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးသွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာန အထူးပါမစ်ထုတ်ပေးရေး OSS အဖွဲ့အနေနဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၇ရက် အထိ ကားအစီးရေ ၂၀၄၀ စီးအတွက် ပါမစ် ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါပြီ။ ကားတင်သွင်းတဲ့အခါ လျှောက်ထားတဲ့ မော်ဒယ်နဲ့ မကိုက်ပေမယ့် ခွင့်ပြုထားတဲ့ ဘောင်ထဲဝင်လျှင် ပြင်ဆင်ခွင့်လျောက်ထားလို့ ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုလျောက်ထားတဲ့အခါမှာ ဘာများလိုအပ်ပါသလဲ။ လျှောက်ထားတဲ့ မော်ဒယ်နဲ့ သွင်းလာတာ မတူညီမှုများအတွက် ဒဏ်ရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလား၊ ဦးကိုကိုမင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး မော်ဒယ် Year လွဲမှားပြီး ဆိပ်ကမ်းကို ရောက်ရှိလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သတ်မှတ်ပေး ထားတဲ့ ဘောင်အတွင်းလွဲမှားမှုအတွက် ပြင်ဆင်ချက် လာလုပ်ရပါမယ်။ သင်္ဘောတင် အထောက် အထား၊ သွင်းကုန်ပါမစ်မူရင်းနဲ့လာပြီး ပြင်ဆင်ရပါမယ်။ စီးပွားကူးသန်းပါမစ်ထုတ်ပေးရေး OSS အဖွဲ့မှာ လာရောက်ပြင်ဆင်ပြီးပါက ဆိပ်ကမ်း၊ အကောက်ခွန်တို့ကို တင်ပြရင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးယူမှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကားတင်သွင်းသူအနေနဲ့ သင်္ဘောတင် တန် ဆာ (BL) ရရှိတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ကားဆိပ်ကမ်း မရောက်မီမှာ ပါမစ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက် အလက်များ၊ Classification များ ကွဲလွဲတယ်ဆို တာနဲ့ ပါမစ်မူရင်းယူလာပြီး စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီး ဌာန အထူးပါမစ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့ကို လာရောက်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်ချက်ကို နေ့ချင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမယ်။ Invoice မှာပါတဲ့ အတိုင်းခွင့်ပြုပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ရရှိထားပြီးသား Invoice တွေ အထူး ပါမစ်တွေအတိုင်း အတိအကျ မလွဲ မမှားဘဲ သွင်းလို့ရနိုင်ပါသလား။ ဦးကိုကိုမင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ပါမစ်တွေ ခွင့်ပြုတဲ့အခါ Invoice မှာပါ တဲ့အချက်အလက်နဲ့ သတ်မှတ်ချက်များ ကိုက် ညီလျှင်ပါမစ် ထုတ်ပေးပါတယ်။ ပါမစ်အတိုင်း တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန်သွင်းလျှင်ဘာပြဿနာ မှ မရှိပါဘူး။ အချို့အချက်အလက်အပေါ် နည်းနည်းပါးပါး လွဲမှားမှုရှိလျင် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ှုInvoice, ပါမစ်အတိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်လျှင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မှားသွားလို့ ပြန်အပ်ပါ ဆိုတာမျိုး ယနေ့ထိ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသေးပါ ဘူး။ ခွင့်ပြုပြီးသားပါမစ်များကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်း ခြင်း တစ်ခါမျှမရှိဘူးပါ။ တချို့ပါမစ်တွေကို ဖုန်းနဲ့ညွန်ကြားပြီး ပယ်ဖျက်တယ်လို့ ကြားသိရလို့ မေးနေတာပါ။ ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ OSS မှာပါတဲ့ဌာနတွေရဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်မှ ၁၈ရက် အတွင်းညှိနှိုင်းမှု ၃-၄ ကြိမ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ခွင့်ပြုနိုင်မဲ့ Year Model တွေကိုနေပြည်တော်-ရန်ကုန် စီးပွားကူးသန်း ရုံး တွေကကြော်ငြာဘုတ် တွေမှာ ကပ်ထားပါတယ်။ ကားအဟောင်းအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း အသိ ပေးထားဖို့ ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာနနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ မှားယွင်းလို့ လိုင်စင်ပြန်သိမ်းရခြင်းမျိုး မရှိအောင် ဂရုပြုလုပ်ဆောင် ပေးလျှက် ရှိပါတယ်။ ကြော်ငြာဘုတ်မှာ ကပ်ထားတာကို ယခုအချိန်ထိ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း လုံးဝမလုပ်သေးပါ။ နိုင်ငံ ပေါင်းစုံ တရုတ်၊ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊ ဥရောပ၊ အာရှ နိုင်ငံတွေရဲ့ ကားမျိုးစုံတွေသွင်းနိုင်ဖို့ အတွက် ကပ်ထားပါတယ်။ ညှိနှိုင်းလို့မပြီးပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကို ဌာနက တာဝန်ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အပတ်စဉ် အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းပေးနေပါတယ်။ လိုအပ်လျှင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ခေါ်ယူအစည်း အဝေးလုပ်ပါတယ်။ Bi Weekly Eleven မှာ ရေးထားတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုလျှင် ကားတစ်မျိုးက Wagon မှာရော Sedan မှာပါ Sub Brand ရှိနေတယ်။ အခုပါမစ်ပေး လိုက် Saloon Hatchback အမျိုး အစားတူ ၂၀၀၂ မော်ဒယ်ဘောင်အတွင်းက ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝိဝါဒ မကွဲပြား ဘဲဖြစ်နေတာ က Wagon အုပ်စုမှာလည်း ဒီ Sub Brand နဲ့ ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ်လို့များ အခု သွင်းလာတဲ့အခါ Wagon အုပ်စု ဖြစ်နေပြီး1999 model ထက်ကျော်သွားလျင် ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်း ရောက်တဲ့အခါ အခက်အခဲမဖြစ်အောင် သတိပြုမိအောင်လို့ သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်လျင် ကူညီပေးဖို့၊ လဲလှယ်ပေးဖို့ ဆက်သွယ် ညှိနှိုင်းခဲ့တာ သာဖြစ်ပါတယ်။ Spec အတိုင်း တင်သွင်းတာ အတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါဘူးလို့ ဖြေကြားလိုပါတယ်။ အောင်သူရသတင်းထောက် (7 DAY JOURNAL) ပါမစ်သက်တမ်း(၃)လရှှိတယ်လို့ပြော သွားပါတယ်။ (၃)လကျော်သွားလျှင် သက်တမ်းတိုးလို့ ရပါသလား။ ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အထူးပါမစ်ထုတ်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်တွေ မှာ ပထမကားဟောင်း အပ်ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီးကားဝယ်ဖို့လုပ်ရမယ်။ငွေ လွှဲပို့ပေးမယ်လို့အာမခံပြးီမှ စီးပွား ကူးသန်းဝန်ကြီး ဌာနမှာ သွင်းကုန်အထူး ပါမစ်လာလျှောက်ထား ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တင်သွင်းလာမဲ့ ဆိပ်ကမ်းကို ကြည့်တော့ ဂျပန်၊ စင်ကာပူ ဆိပ်ကမ်းတွေ အများဆုံးဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီခရီးက အချိန်(၃) လဆို လုံလောက်ပါတယ်။ သို့သော် အကြောင်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ဝယ်သူဘက်က မဟုတ်ဘဲ ရောင်းသူဘက်ကြောင့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှု ရှိပါက တင်ပြလျှင် စဉ်းစား ဆောင်ရွက်ပေးမယ် လို့ဖြေကြားလိုပါတယ်။ ကားပါမစ်တွေယူထားပြီး သက်တမ်းတွေ လာတိုးနေလျှင် အခက်အခဲတွေ ရှိလာ နိုင်ပါတယ်။တကယ်လုံလောက်တဲ့ ခိုင်လုံ ချက်အကြောင်းများကြောင့်ဆိုလျှင် တိုးပေးပါမယ်။ ဇင်သော်၊ သတင်းထောက် (မော်ဒန်) ကားဟောင်းအပ်နှံတဲ့စလစ်ရပြီး ဘယ်ကာလ အတွင်းပါမစ်လာထုတ်ရမယ်ဆိုပြီး အချိန်သတ်မှတ်ထားတာ ရှိပါသလား သိချင်ပါတယ်။ ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး အချိန်သတ်မှတ်ထားတာ လောလောဆယ် မရှိပါ။ဒါပေမဲ့ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင် OSS အဖွဲ့အစည်းမှာ တင်ပြပေးပြီး သင့်လျော်တဲ့ သက်တမ်းတစ်ခု သတ်မှတ်ဖို့ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ ယခု ကားတင်သွင်းခွင့် ပါမစ်ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီများက လုပ်နေတယ် လို့သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ယခုလိုကားဟောင်း လဲလှယ် တင်သွင်းခွင့် ပေးခြင်းဟာ ပြည်သူလူထု သက်သာချောင်ချိရေး လုပ်ပေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုကား တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားရာမှာ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများပြီး အဆင့်များနေလို့ု့ ကြန့့််ကြာမှုတွေ ရှှိ တယ်လ်လိို့ိ့ ကြားသိရပါတယ်။ အဆင့်လျှော့ချပေးနိိုင်မှုရှှိ၊ မရှှိ သိပါရစေ။ လိိုင်စင် လာလျှောက်တဲ့ဲ့အခါ အဓိကကြုံတွေ့နေရတဲ့ဲ့ အခက်အခဲများအပေါ် အကြံပြုချက်ကိိုလည်းသိပါရစေ။ ဦးကိုကိုမင်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကားတင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လာလျှောက်တဲ့ သူထဲ မှာ ပိုင်ရှင်အနည်းစုသာဖြစ်ပြီး အများစုကတော့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီများသာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ၃-၄ ရက်အတွင်းမှာ ကားဟောင်း ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် လာရောက်ပေမယ့် အများစုဟာ ပြည်ပ နိုင်ငံက ကားဝယ်ယူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အကျွမ်း တဝင်လုပ်နိုင်တဲ့သူရှားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံ တကာကားနဲ့ပတ်သက် ကျွမ်းကျင်တဲ့ သူတွေပေါ် လာလို့ နောက်ပိုင်း အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကပဲ စုစည်းပြီ အများစုကို ဆောင်ရွက်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ One Stop Service မှာ ပါမစ်လျှောက်ထား မယ်ဆိုရင် အဓိက အရေးကြီးတာက ကညနကို ကားအပ်စဉ်ထုတ်ပေးတဲ့ပုံစံ 'ဃ' အထောက် အထားပါရပါမယ်။ အစပိုင်းမှာ တချို့က အဲဒီပုံစံ 'ဃ'တစ်ခုပဲယူလာကြပါတယ်။ အဓိကတော့ အထောက်အထား ၄ခု လိုပါတယ်။ ပုံစံ'ဃ'၊ နောက်ကား ပိုင်ရှင်မှ နိုင်ငံခြားနဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ MICB မှာ Account ဖွင့်ထားတဲ့စာအုပ်ပြရမယ်၊ နောက်ပြီး Sale Contract (သို့) Invoiceပါရမယ်၊ကိုယ်တိုင်လျှောက်ရင် မှတ်ပုံတင်မူရင်း ပါရမှာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ ကိုယ် တိုင်မ ဟုတ်ရင် Special Power လိုအပ်ပါ တယ်။ စပြီးဆောင်ရွက်တဲ့စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်အထိ လာရောက်တဲ့ သူတွေထဲမှာ စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံပါသူ အားလုံးကို နေ့ချင်းပြီးလုပ်ပေးပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် တစ်ရက်ထဲမှာပဲ ၄၁၂ စီးအတွက် ပါမစ် ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် အစောင် ၁၀၀-၂၀၀ရှိတဲ့ရက်မှာ ည ၈နာရီ-၉နာရီမှာ ပြီးပေမဲ့ အဲဒီနေ့က ည ၁၂ နာရီ-၁နာရီ ထိ အပြီး လုပ်ပေးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းလည်း ပါမစ်ထုတ် သူ တိုးလာမှာဖြစ်လို့ လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်း၊ နည်းပညာနဲ့လူအင်အားတွေနဲ့တိုးပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ပါမစ် လုပ်ရာ မှာ ပါရမယ့် အထောက်အထားများကို ကညန ရဲ့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကား လက်ခံတဲ့ ဌာန ၁၈ ခုမှာလည်း ကြိုတင် ဖြန့်ဝေအသိ ပေး ထားပါတယ်။ လတ်တလောကုမ္ပဏီတွေကို ကားတင် သွင်းခွင့် ပါမစ်ထုတ်ပေးနေပြီ ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက် နေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ တချို့က ပြောတာ တော့ ကားတင်သွင်းခွင့်မရသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဟုတ်မဟုတ်နဲ့ နောက်တစ်ခုက တော့ ကားတင်သွင်းခွင့် ပါမစ်အတုပေါ်နေတဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မလဲ ဆိုတာ သိပါရစေ။ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး နံပါတ်(၁)မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကို ကား ပါမစ်ထုတ်ပေးဖို့ ကိစ္စကိုညှိနှိုင်း တင်ပြထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး ဆောင်ရွက် သွားမဲ့အစီ အစဉ်ထဲမှာ ပါရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမေးတဲ့ ကားပါမစ်အတုကိစ္စ အနေနဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာန နေပြည်တော်ရုံးချုပ် မှာမော်တော် ကားပါမစ်ထုတ်ပေးရာမှာအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတို့နဲ့ One Stop Services အဖွဲ့နဲ့ တစ် ထိုင်ထဲ စိစစ်ပြီး ပါမစ်များထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး၊ ထုတ်ပေးတဲ့ ပါမစ်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာန များ ကို မိတ္တူပေးပို့ ဖြန့်ဝေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ဆောင် ရွက်နေတဲ့ သွင်းကုန်အထူးပါမစ်ပေးတဲ့ အစီ အစဉ်မှာ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းများကို လဲလှယ်တဲ့ မော်တော်ကားဟောင်းပိုင်ရှင ်တစ်ဦးချင်းကိုပဲ ထုတ်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်ထဲမှာ ဒေါ်လာ ၃ သောင်းသွင်းထား တဲ့ဲ့ ပြည်ပမှာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်တဲ့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ သင်္ဘောသားတွေကို ကားတင်သွင်းခွင့် ပြုမယ်လို့ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကားတင်သွင်းခွင့်ရှိပြီလား သိပါရစေ။အောင်သူရသတင်းထောက် (7 DAY JOURNAL) ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်သူများအတွက် ကားတင်သွင်းခွင့်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိပါရစေ။ အားမာန်အမှုဆောင်အယ်ဒီတာ(7 DAY JOURNAL) ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက ပြောထားတဲ့ နိုင်ငံခြားငွေရရှိနေတဲ့ သင်္ဘောသား အလုပ်သမား၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများအား ကားတင်သွင်းခွင့်ပြုမှုကို သတင်းထုတ်ပြန်တာ မရှိသေးပါဘူး။ဘယ်တော့လောက် ခွင့်ပြုနိုင်မလဲ သိပါရစေ။ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ပြည်ပမှာ တရားဝင်သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေ တဲ့ အလုပ်သမားများ၊ သင်္ဘောသားများနဲ့ပြည်ပ ပို့ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များဟာ နိုင်ငံတော်အတွက် ဝင်ငွေရှာပေး နေသူတွေဖြစ်လို့ ကားတင်သွင်းခွင့် ပြုဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ပထမအဆင့် ကား ဟောင်းလဲလှယ်မှု ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး ဒုတိ ယအဆင့် Show Room ဖွင့်ဖို့ကိစ္စဆောင်ရွက် ပြီးတာနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာသွားရောက်အလုပ် လုပ်နေ သူ၊ ပြည်ပပို့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကိုလည်း တစ်ဆင့် ပြီး တစ်ဆင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလို ပြည်ပတွင် တရားဝင်လုပ်ကိုင်မှုများ အတွက် ကားတင်သွင်း ခွင့်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်လို့ ရက်သတ်မှတ်ပြီး မပြောလိုပါဘူး။ ဘက်စ် ကားတင်သွင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ ဈေးနှုန်း အရမ်းကြီးမြင့်တာရှိလို့ နိုင်ငံတော်အပိုင်းမှ ဈေးနှုန်းပြင်ဆင်မှု တွေရှိပါသလား သိပါရစေ။ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး အထူးပါမစ်တင်သွင်းမှုကိစ္စ စတင်ဆောင်ရွက်ဖို့သက်ဆိုင်ရာကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့ နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ်တို့နဲ့ တင်သွင်း ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ကားတွေရဲ့မော်ဒယ်နဲ့အမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးထိုင်ပြီးတာ (၄) ကြိမ်ရှိပါပြ၊ီ မော်တော်ကား တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ဌာနတွေရဲ့ တင်ပြ ညှိနှိုင်းမှု အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။စပြီးခွင့်ပြုစဉ်ကတည်းက ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံမှာကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ နဲ့ထရပ်ကားကြီးတွေ၊ ဘတ်စ်ကားကြီးတွေ ဝယ်ယူတင်သွင်းလို့မရနိုင် ဘူးဆိုတာ သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မို့ ထရပ် ကားဆိုရင် ဆိပ်ကမ်းမှာရောက်တဲ့ တန်ဖိုး ဒီထက် ပိုပြီးများဖို့၊ဘတ်စ်ကားဆိုရင်လည်း ဆိပ်ကမ်း အရောက် တန်ဖိုးဒေါ်လာ၃၅၀၀ထက်ပိုမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ခွင့်ပြုချက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ထရပ်ကားတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို ဆိပ်ကမ်းအရောက် ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀နဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀နဲ့ ခွင့်ပြုပေးဖို့ ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ် ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး Procedure တွေ ဖြေလျှော့ဖို့ မေးမြန်းတာတွေရော၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ငန်း တွေကို နားလည်လာဖို့အတွက်ပါ အနည်းငယ် ရှင်းပြလိုပါတယ်။ ကားဟောင်းအပ်နှံပြီး အစားထိုး တင်သွင်းမှုအပေါ်မှာ ကားတင်သွင်းခွင့် အထူး ပါမစ်တွေ ထုတ်ပေးစဉ် တွေ့ကြုံရတဲ့အခက် အခဲ များ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပေါ်ပေါက်နေရတဲ့ အခက် အခဲများပေါ်မူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာOne Stop မှာပါတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့ နေ့စဉ် အဖြေရှာလျက်ရှိနေပါတယ်။ ကားတင်သွင်းခွင့် ပါမစ်လျှောက်ထားရာမှာ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ ဒေါ် လာနဲ့ လက်မခံတာတွေရှိနေလို့ ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ LC ဖွင့်ရင် ဘယ်လိုငွေကြေးနဲ့မှ ဖွင့်လို့ အသုံးပြုလို့ ရတယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်ကြေညာထားဖို့ ဘဏ်နဲ့ ညှိနှိုင်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုန်သွယ်ရေး လုပ် ထုံး လုပ်နည်းအရဘဏ်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဒေါ်လာ Account ရှိမှသာတင်သွင်းခွင့်ပြုတာဖြစ်ပေမဲ့ အထူးပါမစ်မို့ ယခုကားလဲလှယ်တင်သွင်းရာမှာ နိုင်ငံခြား ငွေ Account မရှိသူအတွက် အခြား Account ကနေပြီး ကားဖိုးကို ပေးချေခွင့်ပြုထား ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်က စေတနာနဲ့ ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်လို့ စီးပွားကူးသန်းတစ်ခုထဲရဲ့ သဘောနဲ့မဟုတ် ဘဲ ဘဏ်နဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာနဲ့ ပေးချေလို့မရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ဝယ်တဲ့ အခါ စီးပွားကူးသန်းနဲ့ ဘဏ်ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနဲ့အညီ ငွေလဲလှယ်ပေးချေဖို့ ညှိနှိုင်း ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှုသဘော မဟုတ် ဘဲ မော်တော်ယာဉ် ဟောင်းပိုင်ရှင်တွေကို ကား လဲလှယ်ခွင့် ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးအမွှားကွဲလွဲတဲ့ ကိစ္စတွေကို အကောက်ခွန်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အတိုင်းပဲ လုပ်ဖို့ သဘောတူထားပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံ ထဲကို တခြားနည်းနဲ့ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကားများကို အထူးပါမစ်နဲ့ ခွင့်မပြုဖို့ ညှိနှိုင်းထားသလို မရိုး မသားလုပ်တဲ့ကားများကိုလည်း သိမ်းဆည်းမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။နောက်ပြီး Model / Years ကွဲလွဲချက်များကို မူလခွင့်ပြုချက်ဘောင်အတွင်းက ကွဲလွဲမှုရှိရင် သတ်မှတ်တဲ့ ဒဏ်ကြေးနဲ့ ပေးသွားဖို့ ဆောင်ရွက်ထားပြီး ပါမစ်သက်တမ်းကျော်လွန်မှ ရောက်လာတဲ့ကားများကို ဒဏ်ရိုက်အရေးယူ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲလွဲမှုများကို ဆိပ်ကမ်း မရောက်မီ စီးပွားကူးသန်းမှာ ပြင်ဆင်၊ တင်ပြတာ တွေလုပ်ရင် ဒဏ်ကြေးပေးဖို့မလိုပါဘူး။ ကုန်သွယ် ရေးရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဆိပ်ကမ်းရောက်ပြီးမှ ပြင်ဆင်ခွင့်မပြုပါဘူး။ Ceilng Limmit ရဲ့ Upper Limmit နဲ့ Lower Limmitထက် ပိုပြီးနိမ့်တဲ့၊ မြင့်တဲ့ကားများ တင်သွင်းခြင်းကို ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲ ပြစ်ဒဏ်ချအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက် အတွင်း ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှု သက်သာစေရန် Sub -Brand သီးခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲ ကြော်ငြာ ဘုတ်မှာ ကြော်ငြာထားတဲ့ ကားများအားလုံးကို တင်သွင်း ခွင့်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံသားရဲ့ အကျိုးကို ရှေ့ရှုပြီး Seller ဈေး ကွက်မှာ ဈေးဆွဲတင်လို့ မရမယ့် ဈေးကွက်ထိန် သိမ်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားပြီး ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖေါ်လုပ်ဆောင်သွား ရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ShowRoom တွေမှာ ကား ဟောင်းတွေ လဲလှယ်ရမယ့် ဒေါ်လာ ၃၅၀၀ အတွင်း တန်ဖိုးရှိကားများ ရောင်းချနိုင်ရေး လုပ်ထုံး လုပ်နည်း တင်ပြဆောင်ရွက်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်ကြည်ပြာ၊SKYnet Presenter ဂျာနယ်တွေမှာဖေါ်ပြနေတဲ့ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ နဲ့ ဘာကားမှဝယ်လို့မရဘူးလို့ ပြောနေတာတွေကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။ ဈေးနှုန်းနဲ့မသတ်မှတ်ဘဲ မော်ဒယ်အမျိူးအစားနဲ့ သတ်မှတ်ပေးသင့်တယ်လို့ ဂျာနယ်တွေမှာ ဖော်ပြထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထား သိလိုပါတယ်။ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဥပမာ တိုယိုတာ၊ ဆလွန်းဆိုရင် ၁၉၉၅ မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အတွင်း ကားများကို တင်သွင်းခွင့် ပေးထားတယ်။ တခြားကားတွေကိုလည်း ခုနှစ် အလိုက်၊ ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် ၊ မော်ဒယ် အလိုက် သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ အကျုံးဝင် အောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ One Stop Service နဲ့ မပြတ်ရင် သက်ဆိုင်ရာဌာနနဲ့ ညှိပြီး လုပ်ပေးနိုင်သမျှ မူဘောင်ထဲက တတ်နိုင် သမျှအတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးသွားပါမယ်။ ကားဈေး တွေ ကို Internet တွေမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့လူများလို့ ဈေးများသွားပေမဲ့ ခွင့်ပြုငွေ ပမာဏဘောင်ထဲမှာဝယ်လို့ရတဲ့ကားတွေရှိပါတယ်။ ဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ ကားဟောင်းပိုင်ရှင် များအတွက် အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံ ခြားငွေ လက်ဝယ်ကိုင်ထားသူ၊ စုဆောင်းထားသူ တွေက အများစု မဟုတ်ပါဘူး။ ကားဟောင်းပိုင် ရှင်ထဲမှာ လူတန်းစားမျိုးစုံ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြန်တင် သွင်းနိုင်မယ့် မြညေိ မျိုးစုံ ကြော်ငြာပေးထားပါတယ်။ စီးပွားကူးသန်းသဘောတစ်ခုထဲနဲ့ လုပ်ထား တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကညန၊ အကောက်ခွန်၊ ဘဏ်တို့နဲ့ ညှိပြီးမှ ဈေးနှုန်းကို စနစ်တကျ လေ့လာပြီး ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအစား မော်ဒယ်နဲ့လုပ်ဖို့ ဆိုတာ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန သဘောတစ်ခုထဲနဲ့ လုပ်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတော်မှ စေတနာထားပြီး အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် ပေးတာဖြစ်လို့ စီးပွားရေးတစ်ရပ်အနေနဲ့ သဘော မထားဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ အားမာန်၊ အမှုဆောင်အယ်ဒီတာ ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီတွေက တစ်ဆင့်ကားတင်သွင်းခွင့် လျောက်ထားသူတွေများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကားဟောင်းအပ်နှံသူနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီတွေအကြား စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ပေးထားတာ ရှိပါသလား။ ဝန်ဆောင်ခ တစ်စုံတစ်ရာ သတ်မှတ်ပေးထားပါသလား၊ပြသနာ တစ်စုံတစ်ရာပေါ်လျှင် စီးပွားကူးသန်းအနေနဲ့ ကြားခံဖြေရှင်းပေးဖို့စီစဉ်ထားတာ ရှိပါသလား။ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ယခုအကျိုးဆောင်လုပ်နေတဲ့ ၊ ကြော်ငြာနေ တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ မော်တော်ကားဟောင်း အစား ပြည်ပက ကားအသစ်သွင်းဖို့ လုပ်ပေးနေ တာဟာစီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းနဲ့ တစ်ထပ်ထဲ မဖြစ်ပါဘူး။ ဥပမာ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီက မြန်မာပြည်မှာ တရားဝင်ကားရောင်းချ တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့ စီမံစီးပွားမှာ အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ လျှောက်ထားရပါမယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ ကုမ္ပဏီများ မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ အကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ကိုသာ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက အကျိုး ဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ကားတွေ ကိုရောင်းချခွင့် တရားဝင်အကျိုးဆောင်လွဲအပ် စာနဲ့ အပ်နှံထားရပါမယ်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကိုယ် စား ကားရောင်းဝယ်ခွင့် အပ်နှံထားကြောင်း နိုင်ငံ ခြားကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူက မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီရုံးသို့ လာရောက်၍ ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံ ခြား ကုမ္ပဏီနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးတွင်ဖြစ်စေ တရား ဝင် အကျိုးဆောင်အပ်နှံကြောင်း လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ တရားဝင်အကျိုးဆောင်အဖြစ် မှတ် ပုံတင်ပြီးမှသာ ကားရောင်းဝယ်လုပ်ပေးခြင်းက စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ ညီညွှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်အကျိုးဆောင်မှတ်ပုံတင်မရှိသူနဲ့ ကားတင်သွင်းရန် လုပ်ဆောင်ပြီး ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူအကြားမှာဖြစ်ပေါ်သော ပြဿနာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသည့် တည်ဆဲ ဥပဒေများအရ ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူအကြားမှာပဲ အပြန်အလှန် တာဝန်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ဆန်းမင်း၊ အမှုဆောင်အယ်ဒီတာ(The Voice Weekly) နှစ်လေးဆယ်သက်တမ်းကျော်ကားများ အပ်နှံသည့် ကိစ္စပြီးသွားလျှင် နှစ်သုံးဆယ်မှ လေးဆယ်ကြားကားများကို အပ်နှံခြင်းကိစ္စခေတ္တ ဆိုင်းငံသွားမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတာ မှန်ပါသလား။ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန မှာ ကားဟောင်းအပ်ပြီးကြောင်း စာရွက်စာတမ်း များပါလျှင် အထူးပါမစ်ထုတ်ပေးမယ်လို့ ကြေညာ ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး၊ ထုတ်ရန်အစီအစဉ် လည်း မရှိပါဘူး၊ ဂျာနယ်များမှ တစ်ဆင့် မမှန်ကန် တဲ့ သတင်းများ ပျံ့လွင့်မှုမရှိအောင် ဝိုင်းဝန်း ကူညီ ပေးရန်နှင့် မှန်ကန်တိကျသည့် သတင်းများကို ဖေါ်ပြဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျော်ဆန်းမင်း၊ အမှုဆောင်အယ်ဒီတာ(The Voice Weekly)ှ့ Show Room ၁၀ခုကို ဖွင့်ခွင့်ပေးထားပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်။ မဖွင့်ရသေးဘူး ဆိုရင် ဘယ်တောာ့ဖွင့်မလဲ သိပါရစေ။ မေငယ်၊ သတင်းထောက်ချုပ်(ပြည်မြန်မာ)Show Room ဖွင့်လှစ်ဖို့လာလျှောက်ကြတဲ့ လျှောက်လွှာထဲမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီ ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲ သိပါရစေ။ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး လက်ရှိအချိန်မှာ မော်တော်ကား Show Room ကို ပြည် တွင်းမှာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အတွက် စီးပွားကူးသန်း ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဘယ်ကုမ္ပဏီ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားခြင်း မရှိသေး ပါဘူး။ ယခုပထမအဆင့်အနေ နဲ့ ကားဟောင်းလဲလှယ် တင်သွင်း မှုကို ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး၊ဒုတိယအဆင့် အနေနဲ့မော်တော်ကား Show Room ဖွင့်ဖို့ကိစ္စဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။Show Room ဖွင့်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေလေ့လာစုစည်း တင်ပြထားပြီးဖြစ် ပါတယ်။နောက်အဆင့်အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာသွားရောက်လုပ်ကိုင်သူ များ၊ သင်္ဘောသားများနဲ့ပြည်ပပို့ကုန် ကုမ္ပဏီတွေကားတင်သွင်းခွင့် ကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော ကား Show Room ဖွင့်ခွင့်လျှောက်လွှာအစောင် ၃၀လောက်တော့ ရှိပါပြီ၊ ဆက်လက်လျှောက်ထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ အများစုကပြည်တွင်းက လျှောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းက ဘယ်နှစ်ခု ၊ ပြည်ပကဘယ်နှစ်ခုဆိုတာကိုတော့ မိမိတို့အနေနဲ့ အတိ အကျပြောလို့မရသေးပါဘူး။ ဖွင့်ဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပြီး မကြာခင် ဖွင့်လှစ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပေမဲ့အချိန်အတိ အကျတော့ ပြောလို့ မရသေးပါဘူး။ ဦးရွှေဦး (SKYnet Producer)ဦးသန်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးှ့သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ ShowRoom တွေဖွင့်ခွင့်ရနေပြီလို့ ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ညွှန်ကြားရေးမှုးကြီး ဖြေကြားထားပြီး ဖြစ်ပေမဲ့ ပိုမိုရှင်းလင်းသွားစေရန် ထပ်မံဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။ ShowRoom ဖွင့်ဖို့ အသေးစိတ်လေ့လာပြီး ဖွင့်ခွင့် ရသွားမယ့် ကုမ္ပဏီတွေအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အကြမ်းဖျင်း ရေးဆွဲ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော ဦးစားပေး ဆောင် ရွက်နေတာကတော့ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ဈေးနဲ့ ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် ကားသစ်လဲမယ့်သူတွေကို အထောက်အကူပြု စေရန် သတ်မှတ်နှုန်းထားနဲ့ ကားဝယ်နိုင်အောင် ShowRoom ဖွင့်ခွင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ရေးဆွဲတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကားဟောင်းများအစားထိုးလဲလှယ်ရေးကိစ္စက အထူးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ နည်းလမ်းများကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ စဉ်းစားပြီး တင်ပြထားတာ ဖြစ်လို့ ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ ထုတ်ပြန်ပေးသွားပါမယ်။
ကုန်သွယ်မှု လျင်မြန်ချောမွေ့စေရေးအတွက် Manual မှသည် Online ဆီသို့မှတ်မှတ်သားသားထိုစကား ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာ '' အသေးအဖွဲဟူ၍မရှိ '' '' အရာရာကို အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်ရမည် '' ဆိုတဲ့ စကားစွဲနေတယ်။ နောက်ထပ်မှတ်သားစွဲထင်နေတာက ''စဉ်းစားရန် မပျက် ကွက်နဲ့ '' ''သတင်းပို့ရန် မပျက်ကွက်နဲ့ '' '' ဆောင်ရွက်ရန် မပျက် ကွက်နဲ့''ဆိုတာပါပဲ။ ဒါတွေဟာ လက်တွေ့ဘဝနဲ့ ကိုက်ညီနေပြီး လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နေရ တာကြောင့် စိတ်ထဲစွဲထင်နေတာပါ။ မရှိမဖြစ်ကုန်သွယ်ရေး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာ ဇောက်ချလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်ခွဲခြားလုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့ ဈေးကွက်များ ကြီးထွားလာရေးတို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများပင်လျှင် ပြည်ပကုန်သွယ်မှုလောကကို လက်လှမ်းမီရေးနဲ့ ပြည်ပဈေး ကွက်ရရှိရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေကြရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးပြဿနာအနေနဲ့ လွှမ်းခြုံဆက်စပ် ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဒီကနေ့ အချိန်အခါကာလမှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်ရေး အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာဟာ ကုန်သွယ်မှုပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ ကုန်သွယ်မှုပြုလေလေ စီးပွားရေး ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လေလေလို့ ဆိုရမှာပါ။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် ကုန်သွယ်ရေးဟာ တိုးတက်မှုရဲ့ တွန်းအား အင်ဂျင် တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၊ မဖွံ့ဖြိုးသေးသော နိုင်ငံ တွေအားလုံးအတွက် ကုန်သွယ်ရေးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ အတိတ်ကိုလှန်သော် အရင်ကတော့ ကုန်သွယ်မှုကို နိုင်ငံတော်က အဓိက ဆောင်ရွက်နေပြီး နောက်ပိုင်းမှာမှ စီးပွားရေးမူဝါဒတွေ ပြောင်းလဲပြီး '' ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် '' အကောင်အထည်ဖော်လို့ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့တာပါ။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် မကျင့်သုံးမီ ကာလကို အတိတ်ကာလလို့ ဆိုကြပါစို့၊ အဲဒီအခြေအနေ အဲဒီအချိန် ခါတုန်းက လိုင်စင်ကို လူအင်အားနဲ့ပဲ ဆောင်ရွက်ကြတာပါ။ လက်ရေးတွေနဲ့ဖြည့် လက်နှိပ်စက်ရိုက်၊ ကာဗွန်တွေခံ အိုး ..... များပြားလှစွာ ပင်ပန်းစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ စာရွက်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့လုပ်ခဲ့ကြရတာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဟာ မပြောပလောက်ပါဘူး။ ၁၉၉၈-၉၉ လောက်က ကုန်သွယ်မှု ပမာဏဟာ အများဆုံး ၄ ဘီလီယံ ဝန်းကျင်ထိသာ ရှိခဲ့တာပါ။ ဒါတောင်မှ ဝန်ထမ်းတွေဟာ နေ့မနား၊ ညမနား၊ အချိန်မီပြီးဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြရပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှုတိုးသော်လည်း ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့အတူ ကုန်သွယ်မှုပမာဏတွေ တိုးတက်၊ ကုမ္ပဏီတွေကလည်း များပြားစွာ ပေါ်ထွက်လာသလို သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်ပမာဏဟာလည်း တိုးတက်များပြားလာခဲ့ ပါတယ်။ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ တွေတိုး လိုင်စင်တွေကများလာပေမယ့် တိုးမလာတာက ဝန်ထမ်းအင်အားပါ။ ဘယ်လောက်ပဲတိုးလာပါစေ ဝန်ထမ်း အင်အား က ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး။ ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုစနစ်တွင် နည်းလမ်း (၃)မျိုးနှင့် လိုင်စင် လျှောက်ထားမှု အခြေအနေ လိုင်စင်လျှောက်ထားမှု စုစုပေါင်း၏ ၅၄% မှာ Online စနစ်သို့ ကူးပြောင်းနိုင်ပြီး ကျန် ၄၆%မှာ Manual စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် Diskette (လိုင်စင် application ပုံစံအား လုပ်ငန်းရှင်မှမိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖြည့်သွင်းခြင်း)Manual (လိုင်စင် application ပုံစံအား ဌာန(PAC)ဝန်ထမ်းများမှ ဖြည့်သွင်းပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှု)Tradenet(Tradenet website ကို onlineအသုံးပြု၍ လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း)စဉ်းစားရန် မပျက်မကွက်ခဲ့ ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာ နှစ်စဉ်တိုးတက်လာတာနဲ့အတူသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းပမာဏတွေဟာလည်း ပို၍ ပို၍တိုးတက် များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတိုးတက်များပြားလာတာနဲ့အတူ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုံးလုပ်ငန်းတွေဟာလည်း တိုးတက်များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ အလုပ်အင်အား မမျှတတော့ဘဲ တစ်ပတ်မှာ ၂ ရက်ကနေ ၃ ရက် ထိ နေ့ရောညပါ လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ဒီထက်ကုန်သွယ်မှု ပမာဏတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကြောင့် ရေရှည်အတွက် ဘာလုပ်သင့် လဲဆိုတာ စဉ်းစားခဲ့ကြရပါတယ်။ စဉ်းစားခဲ့ကြတဲ့အစဟာ (၂၀၀၄) ခုနှစ်ပါ။ စဉ်းစားချက်အခြေခံ မနိုင်မနင်းဖြစ်ပြီး ကြန့်ကြာမှုတွေ မဖြစ်စေဖို့၊ အမှားအယွင်း နည်းစေဖို့၊ လုပ်ငန်းတွေ ယခုထက်ပိုမိုလျင်မြန်သွက်လက် စေဖို့၊ နိုင်ငံတော်က ဆောင်ရွက်မယ့်e- government အကြိုပြင် ဆင်မှုအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့၊လိုင်စင်နဲ့ ပတ်သက်သော ဝန်ထမ်းများ Paper Work များဖြင့်ပိကာ နေ့၊ ညပင်ပန်းစွာ ဆောင်ရွက်နေရမှု တွေ ပပျောက်ဖို့၊ နှစ်စဉ်တိုးမြှင့်လာသည့် ကုန်သွယ်မှု ပမာဏနဲ့အတူ ဝန်ထမ်းဦးရေ ထပ်တိုးခန့်စရာမလိုဘဲ ထိရောက်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြံဆခဲ့ပါတယ်။ အဖြေထုတ်သော် အခက်အခဲနဲ့ အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ် ကြိုတင်တွက်ဆပြီး အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ ဝန်ထမ်းဦးရေတိုး ခန့်စရာမလိုဘဲ ထိရောက်တဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်နဲ့e- government မူဘောင်ထဲကနေ Online စနစ်ကို အခြေခံ ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် တာဝန်ရှိသူများက ဆုံးဖြတ် အဖြေထုတ်ခဲ့ပါ တယ်။ စတင်ဆောင်ရွက် သွင်းကုန် ထုတ်ကုန်လိုင်စင်များကို အလွယ်တကူ လျှောက်ထားနိုင်ဖို့အတွက် အိုင်အီးအယ်လ်ပီအက်စ် (IELPS) (Import Export Licensing & Permit System)ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်ရွက်တာနဲ့အတူ ယခင်က လိုင်စင်တစ်စောင်ကို စာရွက်စာတမ်း ထောက်ခံစာတွေ တစ်ထပ်ကြီးနဲ့ ဆောင်ရွက်ရာကနေ အခုတော့ စာရွက်စာတမ်းတွေ တစ်ဝက်ကျော် လျှော့နည်းသွားတယ်။ ဒါ့ပြင်အချိန်လည်းတော်တော် သက်သာသွားတယ်။အမှားအယွင်းလည်းတော်တော်နည်းသွားတယ်။လုပ်ငန်းလည်းတွင်ကျယ်လာတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ယခင်က တစ်ပတ်မှာ ၂ ညအိပ် ၃ ရက်လောက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စတွေက အခုတော့ ၂ နာရီလောက်နဲ့ပြီးအောင် ဆောင်ရွက်လာ နိုင်ပါတော့တယ်။ ဒါ့ပြင် ရုံးအသုံးအဆောင် စရိတ်တွေလည်းလျော့ ကျသွားပါတယ်။ ဒါ့ပြင်လက်ရှိ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘဏ္ဍာနှစ်က ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ 13 Billion ထိ တိုးတက်ခဲ့တာတောင် ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အား နဲ့ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာဟာ သက်သေပါပဲ။ လုပ် ငန်းရှင်တွေ အတွက်လည်း ပိုမိုလွယ်ကူလာတယ်။ အားသာချက် အဓိက အားသာချက်ကတော့ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် တွေကို အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဘယ်နေရာကမဆို ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်တာပါပဲ။ ကုမ္ပဏီကနေ လျှောက်ရင် ရသလို အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မထားသူတွေအနေနဲ့ PAC လို့ခေါ်တဲ့ Public Access Center ကနေလျှောက်ထားတာ၊ ရုံးကကွန်ပျူတာ မှာ အချက်အလက်တွေ ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ပြီး၊ memory Stick/ CD စတာတွေနဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စီးပွားကူးသန်းရုံးကို သယ်ယူလာပြီး လျှောက်ထားတာတွေလဲ လုပ် လို့ ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ Manual နဲ့လျှောက်ထားမယ် ဆိုလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း အလေ့ အကျင့်ရလာတာနဲ့အတူ အခုဆိုရင် လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုရဲ့ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းမှာ Online စနစ်ကိုကူးပြောင်းနိုင်ပါပြီ၊ ကျန် ၄၆ ရာခိုင်နှုန်း ကိုတော့ Manual လို့ခေါ်တဲ့ လိုင်စင် Application ပုံစံကို ဌာန၊ PAC ဝန်ထမ်းများမှ ဖြည့်သွင်းပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုစနစ်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေဆဲပါ။ အဓိက အားသာချက်ကတော့ လိုင်စင်တင်ဖို့ အတွက် Online က တင်မယ်ဆိုရင်တော့ ရုံးပိတ်ရက်မရှိတော့သလို နေ့ည လည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ၂၄ နာရီ ရုံးဖွင့်ရက် ရုံးချိန်ဖြစ်နေသလိုပါပဲ။ ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ Myanmar Tradenet မှာတစ်နှစ် အတွက် ၁၃၀၀၀ိ/- ပေးပြီး အသင်းဝင်ထားရမှာပါ။ ဒါမှမဟုတ်လဲ လိုင်စင်ပုံစံကိုဝယ်၊ မိမိကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်ထားရင် ရပါတယ်။ ဒါဆိုကြိုက်တဲ့အချိန် မိမိကွန်ပျူတာကနေ တင်ထားရုံပါပဲ။ တစ်ဆင့်တက် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ကို online ကနေ လျှောက်ထား လာတာနဲ့အတူ လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်းရာမှာ ငွေကြေး သယ်ယူပြီး ပေးသွင်းရတဲ့ ဒုက္ခက ကင်းဝေးပြီး အဆင်ပြေစေဖို့ E-Payment System ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအများစုက ရန်ကုန်မှာဆိုတော့ နေပြည်တော်ကို ငွေသားသယ်လာပြီး ပေးသွင်း စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ရန်ကုန်က မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှာ ငွေစာရင်းဖွင့်ပြီး ငွေပေးသွင်းထားရင် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်ကြေးကို ငွေသားပေးသွင်းရန် မလိုဘဲ ဘဏ်စာရင်းကနေ အလိုအလျောက် ပေးသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အခု E-Payment System ကြောင့် လိုင်စင်ကြေး ပေးသွင်းရန် ငွေကြေးပမာဏကလဲ manual တွက်စရာမလိုတော့ဘဲ လိုင်စင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေး၊ ပြင်ဆင် ကြေး စတာတွေကိုလဲ E-Payment System ကတွက်ချက်ပေး တာကြောင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေလဲ မရှိတော့တာ တွေ့ရပါတယ်။ဒီ E-payment System ကြောင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်နဲ့ ပါမစ်ကြေးတွေအပါအဝင် ဌာနကိုပေးသွင်းရမဲ့ ငွေကြေးတွေ အတွက် ငွေသားအမြောက်အမြား ကိုင်ဆောင်ပြီး ခရီးသွားရတဲ့ အခက်အခဲ၊ အချိန်ကြန့်ကြာတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှား နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုငွေကြိုတင် ပေးသွင်းမှုကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဘဏ်က ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနကို အီးမေးလ်ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးပြီး ငွေစာရင်းဌာနက E-payment စာရင်း ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက် လုပ်ငန်းရှင်ရဲ့ လိုင်စင်ကြေး ကျသင့်ငွေကို သက်ဆိုင်ရာစာရင်းက အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ E-payment Software ကို အသုံးပြုပြီး အလိုအလျောက်နုတ်ယူ သွားတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဘဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆောင်ရွက်လို့ ရပါသေးတယ်။ နယ်စပ်လိုင်စင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုပြုနေသော လုပ်ငန်းရှင်တွေ အဆင် ပြေစေဖို့တွက် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန နယ်စပ်စခန်း အားလုံး ကနေ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့ ပတ် သက်ပြီး Online ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ (BTOS) (Border Trade Online System) ကို ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်လာတာကြောင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစနစ်မှာကတော့ One Stop Service မှာ ပါဝင်တဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်စတာတွေပါ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေး အသင်းဥက္ကဌလည်းဖြစ် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးဟန်စိန်က '' အွန်လိုင်းလိုင်စင်စနစ်နဲ့လုပ်ရတာ အချိန်၊ ငွေ၊ လူအင်အား သုံးရတာကနေ တော်တော်သက်သာသွား တယ်။ လုပ်ငန်း လုပ်ရတာ လွယ်ကူလျင်မြန်တော့ ကုန်သွယ်မှု ပိုများလာပြီး ကုန် သွယ်မှု ပမာဏလည်း ပိုတိုးတက်လာဖို့ပဲရှိတော့တယ်'' လို့ တကယ် ပါဝင်ပတ်သက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့ အတွေ့အကြုံ ပေါ်မှာ ကောက်ချက်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ ကိုယ်စားလှယ် စီးပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနမှာ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ မှတ်ပုံတင်တာကို တိကျမှန်ကန်မြန်ဆန် စေဖို့အတွက်ကိုလည်း (Company and Agent Registration System) ကို ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ အရင်တုန်းက ဆိုရင် ကုမ္ပဏီရဲ့ ဒါရိုက်တာစာရင်းမှာပါဝင်မှု မရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကို လိုင်စင်ကိစ္စ စေလွှတ်ရင် တာဝန်ရှိသူတွေက လိုင်စင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ မရှင်းလင်းတာ မေးရင် အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုကတော့ Company And Agent Registration System ကြောင့် အဆင်ပြေ သွားခဲ့ပါပြီ။ အချိန်ကုန် သက်သာ၊ လူပင်ပန်းသက်သာလျင်မြန်စွာနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကုန်သွယ်မှုအစီရင်ခံစာများ အပတ်စဉ် လစဉ် နှစ်စဉ် ပြုစုနေတဲ့ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစီရင်ခံစာအမျိုးမျိုးကို လိုတဲ့အချိန် လိုသလို အလွယ်တကူ လျင်မြန်စွာ ထုတ်ယူရနိုင်စေဖို့အတွက် ကုန်သွယ်မှုအချက် အလက်အစီရင်ခံစာ (Trade Data Reporting System) ကိုလဲ ဆောင်ရွက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်ကို လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ တိကျမှန်ကန်စွာနဲ့ ချက်ချင်းထုတ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန် အမှန်တင် အချက် အလက်စာရင်းတွေကို နိုင်ငံအလိုက် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက် ခုနှစ် အလိုက် ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် (Import Export Licensing & Permit System) နဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် (Trade Data Reporting System) ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာကတည်းက စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အခုအခါမှာတော့ ပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့ နယ်စပ်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု စာရင်းတွေကို တစ်ပါတည်း ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ် ပို့ကုန် သွင်းကုန် Report ၇၀ မျိုး၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ Report ၅ မျိုးတို့ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းမှတ်တမ်း ဒါ့ပြင် လိုင်စင်လျှောက်ထားရာမှာ မသမာမှု မလုပ်နိုင်စေဖို့၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေဖို့၊ ဈေးနှုန်း အချက်အလက်တွေကို ကာလအလိုက် စစ်ဆေး အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် Price Data Bass System ကိုလည်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းက စနစ် တကျဆောင်ရွက်ထားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအခြေခံ ဈေးနှုန်းစာရင်းပေါင်း သွင်းကုန်တွင် ပစ္စည်းအမယ် ၉၀၉၀၈ မျိုး၊ ပို့ကုန်အမယ် ၃၇၇၀ မျိုးကို မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ တိုက်ရိုက်ဈေးနှုန်းထည့်သွင်း ခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မူဆယ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးစခန်းက တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Video Conference ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကုန်စည် တင်ပို့သူ၊ တင်သွင်းသူ ဌာနဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ စသည်ဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေက အများအပြား ပါ။ ဒါ့ပြင် ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးကလည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြောရန်က များပြားလှပါတယ်။ မိမိတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အခက် အခဲတွေကိုလည်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆွေးနွေး ရမယ့်ကိစ္စတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကိစ္စရှိတိုင်း နေပြည်တော် သွားလာရမယ်ဆိုရင် ခရီးစရိတ်၊ အချိန်၊ စားသောက်စရိတ် စတဲ့ အရင်းအနှီးများ လှပါတယ်။ ဒါကြောင့် သက်သာ၊ လွယ်ကူ အစစ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အုပ်ချုပ်မှုမြို့တော် နေပြည်တော်နဲ့ စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်ဟာ အချိန်မရွေး Real Time Video Conferencing ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်မရွေး နေပြည် တော်နဲ့ ရန်ကုန်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ ပြေပြေလည် လည် လွယ်လွယ်ကူကူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆွေး နွေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက် ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်နေသူတွေအားလုံး ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ကုန်သွယ်မှုသတင်း တွေ၊ နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကုန်စည်သတင်းတွေ၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေ သိနိုင်ဖို့၊ Commerce Website (www.commerce. gov.mm) ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်က စတင် လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၃မှာတော့ ကိုယ်ပိုင် Domain name နဲ့ သီးခြားရပ်တည်လွှင့်တင်ခဲ့တာပါ။ ထုတ် ကုန်သွင်းကုန်ကိစ္စတွေကို Online ပေါ်မှာ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ တိကျမြန်ဆန်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ ကုန်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိလိုသမျှ မေးမြန်းနိုင် တဲ့ Myanmar Tradenet Website (www.myanmartradenet.gov.mm)ကို ၂၀၀၆ ဖေဖော်ဝါရီမှာ လွှင့်တင်ထားသလို ဈေးကွက်သတင်း တွေ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် တွေ၊ ဈေးကွက်ဈေးနှုန်းအခြေအနေ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပကုန်သွယ်မှုသတင်းတွေကို အများပြည်သူ တို့သိနိုင်ဖို့ အပတ်စဉ်ထုတ် စီးပွားရေးစာစောင် ဖြစ်တဲ့ The Commerce Journal ကိုလည်း တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေပေးနေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် The Commerce Journal ကိုလဲ (www. commerce journal.com.mm)မှာ e-book အနေနဲ့ ဖတ်နိုင်အောင် လွှင့်တင်ပေးထားပါတယ်။ ရုံးတွင်းဆက်သွယ်မှုစနစ် ကုမ္ပဏီတွေဌာန ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် မှုကို Online ပေါ် ရွှေ့ပြောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သလို ရုံးဌာနတွင်းမှာလဲ Online ကို အခြေခံ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုံးတွင်းမှာလဲ DEMS လို့ခေါ်တဲ့ Document Exchange Management Systemကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သလို Internet နဲ့လဲ စာပေးစာယူလုပ်ငန်းတွေ အားလုံး ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် စီမံခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလတွေမှာ စတင် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဌာနအကြီးအကဲတွေ အနေနဲ့ လက်အောက်ဌာနတွေနဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှုတွေကို အချိန်မရွေး၊ နေရာဒေသ မရွေးဘဲ လိုအပ်သလို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစနစ်တွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့် တစ်ချိန်ထဲ တစ်ပြိုင်ထဲမှာ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ သိရှိနေပြီး အချိန်တိုအတွင်း လုပ်ငန်းတွေကို လျင်မြန်ပြီး မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် အချိန်၊ ငွေကုန်ကျမှု တွေသက်သာခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်အားနဲ့ အလုပ်ပမာဟာ ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့ရပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်း လုံခြုံမှုကိုလဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့အပြော စီးပွားကူးသန်းမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးပြီး ယခုအခါမှာတော့ ပြင်ပစီးပွားရေးအနေနဲ့ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းဟောင်း တစ်ဦးက '' အရင်တုန်းက လိုင်စင်တစ်စောင် ထုတ် ပေးဖို့ဆိုရင် စိစစ်ရတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေက အများကြီး လက်ရေးနဲ့ဖြည့် လက်နှိပ်စက်နဲ့ ရိုက် စာရွက်တွေ တစ်ပုံတစ်ပင် အင်မတန် ဒုက္ခရောက် ခဲ့တာ၊ မှားလို့အဆူခံခဲ့ရတာလည်း အကြိမ်ပေါင်း မနည်းဘူး၊ အခုတော့ အွန်လိုင်းနဲ့ လိုင်စင်လျှောက် ထားတဲ့အချိန်ကစပြီး တော်တော်လေး အဆင်ပြေ သွားတယ်။ ရုံးမှာ မိုးလင်းအောင် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ဘဝကနေ လွတ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အရင်က လိုင်စင်က နည်းနည်းလေး အခု တဖြည်းဖြည်းနဲ့ များလာတာ အရင်ထက် ၅ ဆလောက် ပိုများ တယ်။Manual နဲ့ ဆက်လုပ်နေရင် ဘယ်လိုမှ မနိုင်တာ သေချာတယ်၊ အခု ကိုယ်တိုင်လိုင်စင် လျှောက်ရတဲ့ အချိန်မှာလည်း Online System ကြောင့် တော်တော်ကို လွယ်ကူအဆင်ပြေနေပြီ'' လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ဒါဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် စဉ်းစားခဲ့တဲ့၊ လုပ်ဆောင်ခဲ့ တဲ့ အသီးအအပွင့်တွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ နိဂုံးချုပ်သော် ကုန်သွယ်မှုလျင်မြန်ချောမွေ့ရေးဆိုတာ အခုမှထပြီးလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကုန် သွယ်မှုပမာဏ ၄-၅ ဘီလီယံလောက်ပဲရှိခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကျော်ကတည်းက နောင်တစ်ချိန်ကုန် သွယ်မှုတွေတိုးမြင့်လာရင် ဘယ်လိုထိထိရောက် ရောက် စီမံမလဲဆိုတာကို ကြိုတင်စဉ်းစားလုပ် ဆောင်ခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ ၁၃ ဘီလီယံကုန်သွယ်မှု ရှိလာပေမဲ့ ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ နိုင်နင်းအောင် စီမံခန့်ခွဲနေနိုင် တာဟာ အမြော်အမြင်ကြီးမားခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ အကြီးအကဲ အဆက်ဆက်ရဲ့ ''စဉ်းစားရန်၊ ညွှန်ကြားရန်၊ လုပုပ်ေ်ဆောင်ရ်ရန်'' မပျက်ကွက်ခဲ့လို့ပါပဲ၊